အသက်မပြည့်သေးသူများနှင့်ပြproblemနာရှိသောသောက်သုံးခြင်းသို့ကူးပြောင်းခြင်း - ၁၀ နှစ်မှ ၁၅ နှစ်ကြားရှိဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ယန္တရားများ (၂၀၀၈) - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်ပေါက်
အသက် 10 နှင့် 15 နှစ်အကြားဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ယန္တရားများ (2008): အသက်မပြည့်သေးခြင်းနှင့်ပြဿနာအရက်သောက်သို့အကူးအပြောင်း
ကလေးအထူးကု။ 2008 ဧပြီ; 121 ပျော့ပျောင်း 4: S273-89 ။
Windle M က, လှံကို LP သို့, Fuligni AJ, Angold တစ်ဦးက, ဘရောင်း JD, ထင်းရှူး: D, Smith က GT ကို, Giedd J ကို, Dahl RE.
အပြုအမူသိပ္ပံနှင့်ကျန်းမာရေးပညာရေး, Emory တက္ကသိုလ်, 1518 Clifton လမ်း NE, ROOM တွင် 520, အတ္တလန်တာ, ဂျော်ဂျီယာ 30322, အမေရိကန်နိုင်ငံစီးဌာန။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
မြောက်မြားစွာဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအဆင့်ဆင့်ကိုဖြတ်ပြီး 10 နှစ် 15 များ၏အသက်အရွယ်ကာလ၌ (အပျိုဖော်ဝင်, ဦးနှောက်နှင့်မှတ်ဥာဏ်-ထိခိုက်စေအဆောက်အဦများနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်မိသားစုနှင့်သက်တူရွယ်တူဆက်ဆံရေးနှင့်ပတ်သက်သောဥပမာအပြောင်းအလဲများကို) ပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ ထို့အပြင်အရက်ကိုအသုံးပြုခြင်းစတင်ခြင်းနှင့်တင်းမာမှုလေ့ကဒီကာလအတွင်းပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ ဤဆောင်းပါးသည်ဤ multilevel ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများရဲ့အနှစ်သာရကမှတိရိစ္ဆာန်နှင့်လူ့လေ့လာမှုများနှစ်ဦးစလုံးကိုအသုံးပြုသည်။ အဆိုပါ၏အချိန်ကိုက်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများအတွက်မူကွဲအရက်သေစာသုံးစွဲခြင်းအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုနှင့်ဆက်စပ်သောနေကြသည်။ ဒါဟာဘက်ပေါင်းစုံဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာရှုထောင့်နောက်ဆက်တွဲတားဆီးဖို့နဲ့အကြောင်းတရားများဆက်ဆံဖို့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု, ပြဿနာများ, နှင့်အရက်သုံးစွဲမှုပမာဏ၏အကျိုးဆက်များများအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ကြောင်းအဆိုပြုထားသည်။
keywords: Preadolescent, ဆယ်ကျော်သက်, အပျိုဖော်ဝင်, အသက်မပြည့်သေးအရက်သောက်, ပြဿနာအရက်သောက်, အန္တရာယ်အချက်များ, အကာအကွယ်အချက်များ, အရက်နှင့်အခြားမူးယစ် (AOD) စတင်, AOD အသုံးပြုမှုအပြုအမူ, ကြီးထွားမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုသုံးဇီဝဖွံ့ဖြိုးရေး, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်
Zucker နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကရှေ့ဆောင်းပါးမှာဖော်ပြထားသကဲ့သို့, 10 ၏နှစ်အောက်ကလေးများပင်, အရက်ကိုအသိအမှတ်မပြုယင်း၏အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. အချို့သောထင်မြင်ယူဆချက်နှင့်အသုံးပြုမှု၏အကျိုးဆက်များကိုဖွဲ့စည်းရန်စတင်များနှင့်ပင်အရက်နှင့်အတူသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအတှေ့အကွုံရှိစေခြင်းငှါနိုင်ပါတယ်။ ထိုမှတပါး, အမျိုးမျိုးသောအန္တရာယ်နှင့်အကာအကွယ်အချက်များပြီးသားမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူကြီးစဉ်အတွင်းသောက်သုံးအပြုအမူကိုသြဇာလွှမ်းမိုးသောဤအစောပိုင်းဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကာလအတွင်းတက်ကြွဖြစ်ကြသည်။ ဤအဖြစ်စဉ်များအားလုံးသည်အသက်အရွယ် 10 ထံမှအများအပြားမြီးကောင်ပေါက်အရက်နှင့်အတူစမ်းသပ်စတင်ဖို့အချိန်ဖြစ်သော 15, ရန်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကာလအတွင်းဆက်လက်။ ဤဆောင်းပါးသည်အသက်အရွယ်မရွေး 10 ထံမှ 15 နှင့်အရက်၏အသုံးပြုမှုဖို့ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကာလအကြားဆက်ဆံရေးမှာပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ကြာပါသည်။ အခန်းအသက်-အုပ်စုသည် (ဆိုလိုသည်မှာအဘယ်ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်များတွင်ခန့်မှန်းထားသည်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်တစ်အထူးသဖြင့်အသက်အရွယ်မှာပုံမှန်နဲ့ atypical ဖြစ်ပါသည်) အတွက်စံတန်ဖိုးလူသားဖွံ့ဖြိုးမှုကိုခြုံငုံသုံးသပ်နှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်အစောပိုင်းနှင့်အလယ်တန်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်အန္တရာယ်နှင့်အသက်မပြည့်သေးအရက်သောက်ဖို့နဲ့အနာဂတ်အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောအကာအကွယ်အချက်များစဉ်အတွင်းအရက်သေစာအသုံးပြုမှုကိုဆွေးနွေးထားပါတယ်။
ခေတ် 10-15 များအတွက်စံတန်ဖိုးဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ: ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
အသက်အရွယ် 10 ထံမှ 15 နှစ်ကာလအစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်အလယ်တန်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရဲ့အစလွှမ်းခြုံ။ ဒါဟာသိသိသာသာ, ဇီဝဗေဒသိမြင်မှု, စိတျပိုငျးဆိုငျရာ, လူမှုရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အပြောင်းအလဲအဖြစ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လူမှုရေးပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ အပျိုဖော်ဝင်စကဒီကာလတစ်အမာခံများဖြစ်ပါတယ်။ အရေးကြီးတာက, အတိတ်ရာစုအတွင်းအပျိုဖော်ဝင်၏ပျမ်းမျှအသက်ဆယ်ကျော်သက်လူမှုရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်အမူအကျင့်များအတွက်ဖုံးကွယ်အတူကျဆင်းခဲ့ပါသည်။ အသက်အရွယ် 10 ထံမှ 15 ရန်ကာလကိုလည်းထိုကဲ့သို့သောအလယ်တန်းကျောင်းနှင့်အလယ်တန်းကျောင်းကနေအထက်တန်းကျောင်းမှမူလတန်းကနေရွေ့လျားအဖြစ်အသွင်ကူးပြောင်းမှုများအတွက်သိသာသည်။ စေ့စေ့ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းမျှော်လင့်ချက်များလုပ်ပေးအဖြစ်ထိုမှတပါး, Self-ဝိသေသလက္ခဏာကိစ္စများအရက်၏အသုံးပြုမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေကိုအပါအဝင်, ဤကာလအတွင်းအရေးကြီးသောဖြစ်လာသည်။ တကယ်တော့သူကအများအပြားလူငယ်များအရက်သေစာအသုံးပြုမှုကိုအစပျိုးခြင်းနှင့်သောက်သုံးခြင်းနှင့်မူးရူးသောက်စားစာပေကိုသင်ရိုးညွှန်းတမ်းသောအခါအရာစဉ်အတွင်းကာလဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ စားပှဲ အဆိုပါ 10-15 အသက်အရွယ်-အုပ်စုတစ်စုတို့၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများသောဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကာလ, အကူးအပြောင်း, အခင်းအကျင်း, တာဝန်များကိုနှင့်ပြဿနာများကိုအကျဉ်းချုပ်။
ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကာလနှင့်ကူးပြောင်းရေး, Key ကိုဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ Contexta နှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများနှင့်ကလေးခေတ် 10-15 ၏ကိစ္စများ
အစောပိုင်းနှင့်အလယျပိုငျးဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အတွက် Characterizing ပြောင်းလဲခြင်း
အမျိုးမျိုးသောဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်၏အချိန်ကိုက်နှင့်တစ်ခုရဲ့ tempo တစ်ဦးချင်းစီအတွင်းနှင့်ဖြတ်ပြီးနှစ်ခုလုံးကိုကွဲပြားခြားနားသည်။ အစောပိုင်းနှင့်အလယ်တန်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ထဲကတချို့ဟာအပြောင်းအလဲများကိုအနီးကပ်ထိုကဲ့သို့သောကျောင်းမှာတန်းအဖြစ်, အသက်ဖြစ်ရပ်နှင့်ဆက်စပ်သောနေကြသည်။ အခွားသောအပြောင်းအလဲပိုပြီးနီးနီးကပ်ကပ်ထိုကဲ့သို့သောအပျိုဖော်ဝင်, ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကိုစိတ်ဝင်စားနှင့်ရွယ်တူများ၏ဆွေမျိုးအရေးပါမှုအဖြစ်, ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဇာတ်စင်နှင့်အတူ aligned နေကြပါတယ်။
အပျိုဖော်ဝင်စစတင်ခြင်းသတ်မှတ်ကြောင်း gonadal steroids များ၏အတွင်းသို့ပုံစံများအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုယေဘုယျအားဖြင့်အသက်အရွယ် 10 ခြင်းဖြင့်စတင်။ သူတို့ကဗဟိုအာရုံကြောစနစ်အတွင်းအပြောင်းအလဲများနှင့် neurophysiology အားဖြင့်အဖြစ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွင်အပြင်အတွက် ပို. ပို. သိသာသောအပြောင်းအလဲ (ဥပမာ, အရပ်, ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်အလယ်တန်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများ၏အသွင်အပြင်) ကလိုက်ပါသွားကြသည်။ သို့သော်သိသာတစ်ဦးချင်းစီအပြောင်းအလဲအဖြစ်လူမျိုးရေးနှင့်တိုင်းရင်းသားအုပ်စုများကိုဖြတ်ပြီးအပြောင်းအလဲကဤလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်တည်ရှိပြီးဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, Non-ဟစ်စပန်းနစ်ဖြူမိန်းကလေးတွေအတွက်ရင်သားများနှင့်ဆီးခုံမို့မို့ဆံပင်ဖှံ့ဖွိုးတိုးပုံမှန်အားဟစ်စပန်းနစ်မိန်းကလေးများအကြားမှာရှိတဲ့ကျသွားအတူ Non-ဟစ်စပန်းနစ်က Black မိန်းကလေးတွေအတွက်တစ်နှစ်အစောပိုင်းကအသက်အရွယ် 10.5 န်းကျင်ကစတင်ခဲ့သည်နှင့်။ မီးယပ်စချိန်မှာပျမ်းမျှအသက် Non-ဟစ်စပန်းနစ်ဖြူမိန်းကလေးများနှင့်အစောပိုင်းက Non-ဟစ်စပန်းနစ်က Black မိန်းကလေးငယ်တစ်ဦးလအနည်းငယ်အတွင်းအသက်အရွယ် 12.5 န်းကျင်အစ, အကြာတွင်ဖြစ်ပါသည်။
အပျိုဖော်ဝင်စနဲ့ဆက်စပ်ကြီးထွား spurt နောက်ပိုင်းတွင်ယောက်ျားလေးများအတွက်မိန်းကလေးတွေထက်ဖြစ်ပေါ်သော်လည်း, အပျိုဖော်ဝင်၏အခြားရှုထောင့်မှယေဘုယျအထင်အမြင်မှားစေနိုင်ပါတယ်။ ယောက်ျားလေးများအတွက်လိင်အင်္ဂါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ပျမ်းမျှစတင်ခြင်းအစောပိုင်းက (12.0 နှစ်) ရင်သားကင်ဆာစတင်ခြင်းထက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်သော်လည်း Non-ဟစ်စပန်းနစ်အဖြူအဘို့, ဆီးခုံမို့မို့ဆံပင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ပျမ်းမျှစတင်ခြင်း, မိန်းကလေးငယ်များ (10.6 နှစ်ပေါင်း vs. 10.0) ထက်ယောက်ျားလေးများအတွက်နောက်ပိုင်းတွင်ပေါ်ပေါက်ဖို့ရှာတွေ့ခဲ့သည် မိန်းကလေးငယ်များ (10.4 နှစ်) အတွင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး (နေရောင် et al ။ 2002).
အဆိုပါ Developing ဦးနှောက်အတွက်အပြောင်းအလဲများ
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းရင့်ကျက်သောအပြောင်းအလဲတစ်ခုစီးရီးဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲများနှင့်အတွေ့အကြုံများတိုးပွားလာ၏ရလဒ်အဖြစ်ဦးနှောက်ကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ယောက်ျားလေးများအတွက်အကြောင်းကိုမိန်းကလေးတွေအတွက်အသက်အရွယ် 11 နှင့်အသက်အရွယ် 12 အထိဖြစ်ပေါ်ကြောင်းမီးခိုးရောင်အမှု၌အသီးအနှံကို၎င်းနှောက် cortex (Giedd et al အတွက်မီးခိုးရောင်ကိစ္စ volume ထဲမှာတစ်ဦးတဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းသွားခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သည်။ 1997, 1999; Gogtay et al ။ 2004; Sowell et al ။ 2004; Toga နှင့် Thompson က 2003) ။ အဆိုပါကျဆင်းခြင်းထိုကဲ့သို့သော dendritic အဖြစ်လူသိများအာရုံခံအကြား Synaptic ဆက်သွယ်မှုအတွက်လျှော့ချအဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များကနေဖြစ်ပေါ်ဖို့စဉ်းစားနေပါတယ် "တံစဉ်များကို။ " 10 နှင့် 15 အသက်အနှစ်အသက်အရွယ်အကြားကာလစီစဉ်နိုင်စွမ်းအပါအဝင်သိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များအတွက်သိသာထင်ရှားသောစီးပွားရေးတိုးတက်မှုကပါဝင်ပတ်သက်, သတင်းအချက်အလက်ကိုထိန်းသိမ်းရန် " အွန်လိုင်း, "(ရှုပ်ထွေးသောသိမြင်မှုလုပ်ငန်းများကိုဖြေရှင်းနှင့် Self-စည်းမျဉ်းများနှင့် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုပြLuna နှင့် Sweeney 2004) ။ အရေးကြီးတာက, စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းထိန်းချုပ်မှုဖြစ်စဉ်များပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့နှစ်ဆယ်ကျော်သို့ကောင်းစွာအတိတ်အသက်အရွယ် 15 ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆက်လက်။
မြီးကောင်ပေါက် (သူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်များအတွက် သာ. ကြီးမြတ်အတက်အကျသတင်းပို့Larson et al ။ 2002), (ပိုပြီး acute အလွန်အမင်းစိတ်ခံစားမှုဖြစ်ရပ်များကိုတွေ့ကြုံခံစားနှင့် preadolescents ထက်အုပ်ချုပ်မှုကို-ချိုးဖောက်အပြုအမူပိုဖြစ်စဉ်များပြလေ့Moffitt နှင့် Caspi 2001) ။ အိပ်စက်ခြင်းနှင့် arousal စည်းမျဉ်းပုံစံများသည်လည်းသောနေ့၌အကြာတွင်သည်အထိကြာကြာအိပ်ပျော်နိုးနေဖို့တစ်ဦးချင်းစီကိုလှုံ့ဆော်ဖို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲက Circadian rhythms (တစ်ဦးပြောင်းကုန်ပြီအတူမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်သိသိသာသာပြောင်းလဲသွားနယ်လ်ဆင် et al ။ 2002) ။ ဤပြောင်းလဲမှုများ psychopathology ၏ပုံစံအမျိုးမျိုး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အန္တရာယ်အခြေခံရသောအမူအကျင့်စည်းမျဉ်းများတွင်ကျယ်ပြန့်သောအပြောင်းအလဲနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ တကယ်တော့အဓိကစိတ်ကျရောဂါအပါအဝင်အများအပြား psychopathologies ၏နှုန်းထားများ, လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါအမျိုးမျိုးအပြုအမူမမှန်ခြင်း, ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန် (မြီးကောင်ပေါက်အသက်အရွယ် 10-15 အကြားသိသိသာသာတိုးမြှင့်Angold et al ။ 1998; Costello et al ။ 2002).
အားလုံးကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်အရေးအပါဆုံးလူမှုရေးဆက်ဆံရေး၎င်းတို့၏မိသားစုများနှင့်ရွယ်တူချင်းအတူရှိသူများဖြစ်ကြသည်။ 10 နှင့် 15 ၏အသက်အရွယ်အကြားဤအရေးပါသောဆက်ဆံရေးသိသိသာသာအပြောင်းအလဲများကိုခံယူ။
လူငယ်များပုံမှန်အားဖြင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်း၎င်းတို့၏မိသားစုများအနေဖြင့်ရိုင်းစိုင်းဖြစ်လာသောယုံကြည်ချက်တိဖြစ်၏ သို့သော်သူက (မျိုးဆက်ပွားရင့်ကျက်ရောက်ရှိသည့် Natal မိသားစုထံမှခွဲခြာအားပေးအားမြှောက်ထားတဲ့ evolutionarily သပ္ပါယ်ယန္တရားကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်းကြောင်းအကြံပြုထားသည်Steinberg 1989) ။ ထိုမှတပါး, ကလေးများနှင့်သူတို့၏မိဘများအကြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကွာအဝေး (အထူးသဖြင့်ကလေးများနှင့်သူတို့၏ဘိုးဘေးများအကြား, တိုးမFuligni 1998; Steinberg 1988) ။ အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်မိဘကလေးပဋိပက္ခ၏ခြုံငုံကြိမ်နှုန်းသည်ဤနှစ်တာကာလအတွင်းတိုးမြှင့်မထားဘူးရှင်းပြရသောသူတို့၏မိဘများနှင့်အခြားမိသားစုဝင်များနှင့်အတူသိသိသာသာလျော့နည်းအချိန်ဖြုန်းနေကြတယ်။ သူတို့ဖြစ်ပေါ်ပြုကြသည့်အခါအငြင်းပွားမှုများများ၏ပြင်းထန်မှု, သို့သော်,, ( သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်ပေါ်လာသောLaursen et al ။ 1998) ။ ဒီအဆင့်စဉ်အတွင်းမြီးကောင်ပေါက် ( သာ. ကြီးမြတ်လူမှုရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့်ကိုယ်အဘို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်အခွင့်အလမ်းရှာခြင်းငှါSmetana 1988) ။ သူတို့က ပို. ပို. (အဓိကအားဖြင့်လူကြီးများအားဖြင့် unsupervised ဖြစ်ပါတယ်အများကြီးရာ၏) ရွယ်တူတွေနဲ့ပိုပြီးအချိန်ဖြုန်းခြင်းနှင့်တဖန်သူတို့ကိုမလွှမ်းမိုးလျက်ရှိသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, မဲ့တိုးပွါးစဉ်းစားရန်၎င်းတို့၏စွမ်းရည်အဖြစ်, ဆယ်ကျော်သက်သူတို့ (be "သင့်ပါတယ်" ဘယ်လို idealizing, ငြင်းခုံမှာပိုပြီးကျွမ်းကျင်နှင့်၎င်းတို့၏မိဘများပိုမိုအရေးပါဖြစ်လာCollins 1990) ။ ဤပြောင်းလဲမှုများအားလုံးသည်မိဘကလေးကြားဆက်ဆံရေး၏သဘောသဘာဝပြောင်းလဲပစ်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်မိဘများဟာသူတို့ရဲ့သားသမီးရဲ့ဘဝအသက်တာ၌သိသိသာသာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိနေဆဲသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်။
အသက်အရွယ် 11-13 န်းကျင် peer သြဇာလွှမ်းမိုးမှုထိပ်။ အများဆုံးအမေရိကန်ဆယ်ကျော်သက်အလယ်တန်းကျောင်း၌ရှိကြ၏တဲ့အခါဒီပါ (အသက်အပိုင်းအခြားဖြစ်ပါသည်Berndt 1979; Steinberg နဲ့ Silverberg 1986) နှင့်တဲ့အခါမှာအတန်းအစားထဲကသုံးစွဲမကြာခဏလူတန်းစားအပြောင်းအလဲများနှင့်အချိန်ပိုမိုရွယ်တူချင်းရန်ဟာသူတို့ရဲ့ထိတွေ့မှုတိုးမြှင့်။ ဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးရဲ့ရွယ်တူ, မိတ်ဆွေများနှင့်ရင်းနှီးအခြားသူများကိုပုံမှန်အားဖြင့်သူတို့ကအသက်အရွယ် 10 မှကြိုတင်လုပ်ခဲ့တယ်ထက်သူသို့မဟုတ်သူမ၏ယုံကြည်ချက်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, အပြုအမူ, အပန်းဖြေလုပ်ငန်းများရွေးချယ်မှုနှင့် (အဝတ်နှင့်ဂီတအတွက်ဥပမာ) ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဦးစားပေးလုပ်ဖို့ပိုပြီးအထောက်အကူဖြစ်စေ။ ဤသည်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုလည်း (အန္တရာယ်များနှင့် antisocial အပြုအမူမှတိုးချဲ့နိုင်ပါတယ်Berndt 1979) ။ မိဘတို့, အခြားတစ်ဖက်တွင်, ထိုကဲ့သို့သောဘာသာရေး, စာရိတ္တနှင့်ပညာရေးအဖြစ်အခြေခံပြဿနာများကိုပေါ်တွင်၎င်းတို့၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်။
၎င်းတို့၏မိသားစုများနှင့်အတူခက်ခဲဆက်ဆံရေးရှိသည်သောသူအစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက် (ဥပမာ, ၎င်းတို့၏မိဘများလည်းသူတို့နှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်ထိန်းချုပ်ထားသို့မဟုတ်ကြသည်မဟုတ်) (ရွယ်တူချင်းဆီသို့ Oriental ဖို့ပိုများပါတယ်Fuligni နှင့်ဒ 1993) ။ တချို့ကတို့ကလက်ခံနိုင်ရန်အတွက်အပြုသဘောဆောင်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်သူတို့၏ဘဝများရှုထောင့်ကိုပူဇျောဖို့လိုလိုလားလားဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ရွယ်တူချင်းအတူပေါ်ပြူလာဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒီပို deviant သက်တူရွယ်တူအုပ်စုများနှင့်အတူ Affiliate သူတို့ကိုဦးဆောင်လမ်းပြခြင်းနှင့်အရက်သေစာအသုံးပြုမှုအပါအဝင်ပိုပြီးအန္တရာယ်များအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံ, အထက်တန်းကျောင်းနှစ်တာကာလအတွင်းမည်အကြောင်း (Fuligni et al ။ 2001) ။ သင်တန်း၏, ချစ်ကြည်ရေးသိုက်နှင့်သက်တူရွယ်တူအုပ်စုများ (အလွန်ကွဲပြားခြားနားကြသည်ဘရောင်း 1990), နှင့်အားလုံးမဟုတ်အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်ရွယ်တူအုပ်စုများအန္တရာယ်များအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံ။
ရွယ်တူချင်းပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့် Pubertal ရင့်ကျက်
သက်တူရွယ်တူပါဝင်ပတ်သက်မှုအတွက်တိုး pubertal ရငျ့၏အထွတ်အထိပ်နှင့်တိုက်ဆိုင်။ ဒီပုံမှန်အား 10 နှင့် 15 ၏အသက်အရွယ်အကြားဖြစ်ပေါ်သွားရမည်အကြောင်း, အပျိုဖော်ဝင်၏တစ်ခုရဲ့ tempo နှင့်အချိန်ကိုက်အတွက်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအပြောင်းအလဲရှိပါတယ်။ မျိုးဆက်ပွားရင့်ကျက်မှု၏ဆည်းနှင့်ဤကာလခွဲခြားကြောင်းအလယ်တန်းလိင်ဝိသေသလက္ခဏာများပေါ်ပေါက်ရေးမြီးကောင်ပေါက်သူတို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းအလောင်းများကိုဖို့ညှိအဖြစ်လူကြိုက်များနှင့်အဆင့်အတန်းအဖြစ် Self-ဝိညာဏ်နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှု၏ရင်းမြစ်ဖြစ်နှင့်အခြားသူများမှမိမိတို့ကိုယ်ကိုနှိုငျးယှဉျနိုငျသညျ။ ဥပမာအားဖြင့်, လေ့လာမှုများအစောပိုင်း-ဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းမိန်းကလေးငယ်များ internalizing ပြဿနာများ (ဆိုလိုသည်မှာ, စိုးရိမ်ပူပန်သို့မဟုတ်စိတ်ကျရောဂါ) အတွက်အန္တရာယ်တိုးလာကြပြီပြသခဲ့ကြသည်။ အခြို့သောအဘို့, ဒီမီးယပ်စချိန်ပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက်လိုအပ်သောကြောင်းခန္ဓာကိုယ်အဆီထဲမှာတိုး (ချိတ်ဆက်စေခြင်းငှါGe et al ။ 1996; Peterson 1988) ။ ထို့အပြင်အချို့အစောပိုင်း-ဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းမိန်းကလေးများထိုကဲ့သို့သောက်သုံးရေအဖြစ်အပြုအမူတွေအဟောင်းတွေယောက်ျားလေးများ (နဲ့အတူဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဆက်နွယ်မှု၏ဖြစ်ပေါ်ရသောအခင်းအကျင်းစေ့စေ့ကြည့်ရှုရန်ထိတွေ့မှုများအတွက်ပိုမိုမြင့်မားအန္တရာယ်မှာMagnusson et al ။ 1985).
ချိန်းတွေ့၏စတင်လိင်, လူမျိုးရေးနှင့်ယာနျဘာသာတရားကိုကလွှမ်းမိုးနေသည်သွားရမည်အကြောင်း (Collins 2003), အခြားအမှုအရာတို့ကိုအကြား, United States မှာမြီးကောင်ပေါက်ပုံမှန်အား 13 သို့မဟုတ် 14 များ၏အသက်အရွယ်န်းကျင်ယနေ့အထိစတင်ဖို့။ အစောပိုင်း-ဆယ်ကျော်သက်ချိန်းတွေ့ပိုပြီးလူမှုရေးအရ Romantic ညွှန်ကြားထက်နှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူအချိန်ဖြုန်းဖို့တစ်လမ်းဖြစ်ထင်နေသည်။ ပိုမိုလေးနက်နှင့်ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးတည်မြဲပုံမှန်အားဖြင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်နောက်ပိုင်းမှာဖွံ့ဖြိုး။
ပျမ်းမျှအားတွင်, ဒီနေ့ရဲ့မြီးကောင်ပေါက်ကိုပိုမိုမကြာခဏအတိတ်ကာလထက်တစ်အစောပိုင်းကအသက်အရွယ်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအတွင်းထိတွေ့ဆက်ဆံပါ။ ချိန်းတွေ့နှင့်ဝသကဲ့သို့, ကျား, မ, လူမျိုးရေးနှင့်ယာနျဘာသာတရားကိုဖြတ်ပြီးအရေးကြီးသောမူကွဲရှိပါတယ်, နှင့်လူငယ်အများစု 15 များ၏အသက်အရွယ်မတိုင်မီလိင်ဆက်ဆံမှုအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံကြဘူးပေမယ့်ပြုတဲ့သူတွေကို (မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်သုံးစွဲခြင်းအဘို့အမြင့်မားသောအန္တရာယ်မှာဖြစ်နိုင်ပါသည်Rosenthal et al ။ 1999).
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မိသားစု context နှင့်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုသွဇာအတွက်အပြောင်းအလဲများ
အဆိုပါ 10-15 အသက်အရွယ်-အုပ်စု, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုရေးအခင်းအကျင်းအပြောင်းအလဲများသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လွှမ်းမိုးမှုတစ်ဦးကိုထပ်တိုးထင်ဟပ်သိသိသာသာရှိပါတယ်။ အခြားသူတွေကဒီအသက်အရွယ်-အုပ်စုအတော်လေးသစ်ကိုဖြစ်ကြသည်သော်လည်းတချို့ကအခင်းအကျင်းရှေ့တော်၌, ထက်ဆယ်ကျော်သက်ရဲ့အသက်တာ၌ သာ. ကြီးမြတ်သို့မဟုတ်ပြောင်အရေးပါမှုယူဆ။ ပြီးသားဖော်ပြခဲ့တဲ့အဖြစ်ပေမယ့်မိသားစုနှင့်ကျောင်းသည်ကြီးစိုးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခင်းအကျင်းတည်မြီးကောင်ပေါက်တဖြည်းဖြည်း၎င်းတို့၏မိဘများနှင့်အတူအထက်တန်းကျောင်းတစ်လျှောက်လုံးဆက်လက်တဲ့လမ်းကြောင်းသစ်လျော့နည်းအချိန်ဖြုန်းနေကြတယ်။ ယောက်ျားလေးများအနက်မိဘများနှင့်မိသားစုများနှင့်အတူအချိန် (တစ်ဦးတည်းသုံးစွဲအချိန်အားဖြင့်၎င်း,, မိန်းကလေးများအကြား, တစ်ဦးတည်းအချိန်အားဖြင့်၎င်း, သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူအစားထိုးနေသည်Larson နှင့် Richards 1991).
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌သားသမီးများ၏အများစုသည်အဘို့, အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အလယ်တန်းသို့မဟုတ်အငယ်တန်းအထက်တန်းကျောင်းမှမူလတန်းကျောင်းကနေအကူးအပြောင်းအထိချဲ့ကာ။ အများသောသူတို့တစ်ယောက်တည်းကျောင်းများပြောင်းလဲနေတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုရှိနိုင်ပါသည်။ စိတ်ဖိစီးမှုမှထည့်သွင်းခြင်း, အလယ်တန်းကျောင်းများ၏နေ့စဉ်ကျောင်းကိုပတ်ဝန်းကျင် (မူလတန်းကျောင်းထက်သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသည်ဒ et al ။ 1993; Simmons နှင့် Blyth 1987) ။ ပိုကြီးတဲ့ကျောင်းများနှင့်ကျောင်းသားအလောင်းတွေ, မျိုးစုံအတန်းများနှင့်ဆရာ, ဆရာမ, ပိုမိုတင်းကြပ်ငယ်များအတွက်လက်ဖက်ရည်နှိုင်းယှဉ်စွမ်းဆောင်ရည်အကဲဖြတ်နည်းသီးခြားညွှန်ကြားချက်များနှင့်ကျောင်းသား-ဆရာအပြန်အလှန်၏အောက်ပိုင်းအဆင့်ဆင့်၏ရလဒ်အဖြစ်များစွာသောအစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်ကျောင်းကို related အခ်ါလှုံ့ဆျောမှု၏ဆုံးရှုံးမှုကိုခံစားရ။ ပညာရေးဆိုင်ရာရေးရာအဘို့မိမိတို့ကျောင်းနှင့်သူတို့၏စိတ်အားထက်သန်မှ၎င်းတို့၏ပူးတွဲဖိုင်ကို wanes ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, များစွာသောလူငယ်များထိုကဲ့သို့သောအားကစားအသင်းများသို့မဟုတ်အထူး-အကျိုးစီးပွားကလပ်အသင်းအဖြစ် Elective လှုပ်ရှားမှုများတွင်ပိုမိုပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်လာသည်။ ဤရွေ့ကားလှုပ်ရှားမှုများရွယ်တူများနှင့် noncaregiver လူကြီးများ (ဥပမာ, အားကစားနည်းပြများ, ကျောင်း-related, ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း, ဒါမှမဟုတ်အသိုင်းအဝိုင်းလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့များ၏အရွယ်ရောက်ပြီးသူခေါင်းဆောင်များ, etc) ဖြင့်အရေးကြီးသောအသစ်သောလူမှုရေးပတ်ဝန်းကျင်မှာဖွင့်ဖွင့်လှစ်။ ဤရွေ့ကားသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အသွင်ကူးပြောင်းမှုလိုက်လျောညီထွေနှင့်ပိုမိုသိမြင်မှု, စိတျပိုငျးဆိုငျရာ, လူမှုရေးထိန်းချုပ်မှုလိုအပ်သည့်ဆယ်ကျော်သက်အသစ်တောင်းဆိုချက်များကိုထားပါ။
အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်ပုံမှန်အားဖြင့်မိမိအဆွေအမျိုးအလိုက်ပိုပြီးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးထားနှင့်အိမ်အပြင်ဘက်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပိုမို immersive ဖြစ်လာရသည်။ သူတို့ကရုပ်ရှင်ရုံ, ပန်းခြံများနှင့်မောလ်များ (ထဲမှာ, ရပ်ကွက်အတွင်းမှာရှိတဲ့အထဲကဆွဲထားပိုပြီးအချိန်ပေးSteinberg 1990) ။ တချို့ရပ်ကွက် (ဆင်းရဲမွဲတေမှု, ရာဇဝတ်မှုနှင့် antisocial လှုပ်ရှားမှုဥပမာမြင့်မား) ၏ပြဿနာရှုထောင့်ကလေးတွေမိဘများနှင့်မိသားစုများ (နေဖြင့်စစ်ထုတ်ခြင်းသို့မဟုတ်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းမရှိဘဲထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းအချက်များနှင့်ထိတွေ့သည့်အခါအထူးသဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်နှစ်တာကာလအတွင်း, ဖွံ့ဖြိုးရေးအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်Leventhal နှင့် Brooks-ဂွန် 2000) ။ အဆိုပါသက်ရောက်မှု (အရည်အသွေးမြင့်ပြီးနောက်ကျောင်းလှုပ်ရှားမှုများ၏မရှိခြင်းအတွက် သာ. ကြီးမြတ်သည်Pedersen နှင့် Seidman 2005) ။ အဆိုပါရပ်ကွက်အတွင်းတွင်ပိုမို unsupervised အချိန်ဖြုန်းတဲ့သူအစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်ထိုကဲ့သို့သောအရက်နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုအဖြစ်အန္တရာယ်များအပြုအမူအတွက်စေ့စပ်အဟောင်းတွေမြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူငယ်လူကြီးများ, ထိတွေ့ခံရဖို့ကပိုများပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကအစိတ်အပိုင်းအတွက်ဖြစ်နိုင်သည်။
အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်တက်ကြွစွာသူတို့ကလူမှုရေးအခင်းအကျင်းသို့ fit တို့သည်အဘယ်မှာရှိကြသနည်းနှင့်အတူအဘယ်သူထွက်ရှာဖွေအတွက်စေ့စပ်နေကြတယ်။ မေးခွန်းလွှာသူတို့ရဲ့ရွယ်တူများနှင့်ပိုမိုကြီးမားသောလူ့အဖွဲ့အစည်းထိုသူတို့အဘို့ရှိသည်သောအမူအကျင့်များနှင့် stylist မျှော်လင့်ချက်များနှင့် ပတ်သက်. ပေါ်ထွန်း။ လူမျိုးရေး, ကျား, မ, နှင့်ဘာသာရေးပုဂ္ဂိုလ်ရေးဝိသေသလက္ခဏာတစ်ခုအရင်းအမြစ်အဖြစ်ပိုပြီးအရေးပါလာ (Phinney 1990), နှင့်, ဤအချက်များအပေါ်အခြေခံပြီး, အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက် differential ကိုကုသမှုနှင့်မျှော်လင့်ချက်များတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပြီးမိမိကိုယ်ကိုဆီသို့တွန်းသို့မဟုတ်ကွာအချို့လှုပ်ရှားမှုများအနေဖြင့် (ရှာတွေ့စေခြင်းငှါဂရင်း et al ။ 2006) ။ မြီးကောင်ပေါက်ဝိသေသလက္ခဏာများ၏ပြဿနာများကိုအတူ wrestle အဖြစ်သူတို့ဖွယ်ရှိအရက်သေစာသုံးစွဲခြင်းနှင့် ပတ်သက်. ရွေးချယ်မှုများနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်လိမ့်မည်။ သောက်အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်အရက်၏ pharmacologic ဆိုးကျိုးများတွေ့ကြုံခံစားရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သကဲ့သို့ကွဲပြားခြားနားသောအခန်းကဏ္ဍအပေါ်ကြိုးစားနေ၏အဖြစ်အများကြီးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
မြီးကောင်ပေါက် ((ပျမ်းမျှအားဖြင့်67 နှစ်အရွယ်မှ 11- ဘို့နာရီတစ်ရက် 15 မှ) အစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာအချို့ကိုပုံစံမှဖမ်းယူနားဆင်သူတို့ရဲ့တစ်နေ့တာအများကြီးဖြုန်းရောဘတ် et al ။ 2004a) ။ မီဒီယာသိသိသာသာလူမှုရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်တယ်, မကြာခဏသွားအရွယ်ရောက်ပြီးသူစောင့်ကြည့်မှု, စကားပြောဆိုမှု, ဒါမှမဟုတ်မက်ဆေ့ခ်ျ၏အနက်ကိုအဘို့အနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်လုံးဝမအခွင့်အလမ်းနှင့်အတူမိဘများအနေဖြင့်တွေ့ကြုံသည်။ အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်တစ်အများစုကသူတို့အိပ်ခန်းထဲမှာရုပ်မြင်သံကြားအစုံရှိသည်, လုနီးပါးအားလုံးသံကိုစနစ်၏အချို့မျိုးရှိသည်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့အသက်အရွယ်-အုပ်စုမီဒီယာတွေကိုကူညီနေတဲ့တစ်အကွာအဝေးအတွက်ညှိခြင်းနှင့်, အပြင်, အဟောင်းတွေဆယ်ကျော်သက်များအတွက်တီထွင်မီဒီယာတက်ရောက်ကြပါတယ်။ ထို့အပွငျ, ဒီအသက်အရွယ်-အုပ်စုတစ်စုကိုမကြာခဏ (အင်တာနက်ကို surfing စဉ်ဂီတကိုနားထောင်ခြင်း, ဥပမာ) တစ်ပြိုင်နက်တည်းတစ်ခုထက် ပို. အလတ်စားအသုံးပြုသည်။ မြီးကောင်ပေါက်လည်းရောဘတ် et al ((ဥပမာ, စာသား, instant messaging) မိမိတို့၏သူငယ်ချင်းများနှင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်နည်းပညာကို အသုံးပြု. နှင့်သစ်တွေတွေ့ဆုံနေ့တိုင်းနာရီဖြုန်းနေကြတယ်။ 2004a,b)
အရက်မက်ဆေ့ခ်ျများလက်လှမ်း adolescents သောမီဒီယာအတွက်ကျယ်ပြန့်ရှိပါတယ်။ အရက်အများဆုံးမကြာခဏကွန်ယက်ကိုရုပ်မြင်သံကြားပေါ်မှာအစားအစာသို့မဟုတ်သောက်စရာပုံဖော်နေပါတယ်။ ချုပ်အချိန်စိတ်ကူးယဉ်ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များအကြောင်းသုံးပုံနှစ်ပုံ (တစ်နာရီလျှင်အကြောင်းကိုရှစ်အရက်သောက်ပြုမူသောအမှုနှုန်းမှာအရက်အသုံးပြုမှုပုံဖော်Mathios et al ။ 1998) ။ MTV နဲ့ VH-1 အပေါ်ဗီဒီယိုများတစ်ဦးထက်ပို-စတုတ္ထအရက်သုံးစွဲခြင်းကိုပြသ; ဤအရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းများနှစ်ခုစလုံး (အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်များ၏အကြိုက်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းDurant et al ။ 1997) ။ ဆယ်ကျော်သက်ဇာတ်ကောင်မကြာခဏမရှိသလောက်အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များ (အတူဆယ်ကျော်သက်-oriented ရုပ်ရှင်များတွင်သောက်သုံးဖော်ပြပါရှိသည်Stern ပာ 2005).
အစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာသောက်သုံးရေနှင့်ဆက်စပ်သောမော်ဒယ်တန်ဖိုးများနှင့်အပြုအမူအားဖြင့်အရက်သုံးစွဲခြင်းအတွက် "စူပါသက်တူရွယ်တူ" ၏တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာအဖြစ်ဆောင်ရွက်စေနိုင်သည်။ ရုပ်မြင်သံကြားပေါ်အကြမ်းဖက်မှုကြည့်ရှု၏ဆိုးကျိုးများအပေါ်လေ့လာရေးမြီးကောင်ပေါက်မီဒီယာအတွက်အရက်ပုံဖော်ခြင်းအားဖြင့်ထိခိုက်ကြသည်ကိုဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုအကြောင်းကြားကိုကူညီလိမ့်မည်။ သူများသည်လေ့လာမှုများကြောင့်အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များမခံစားဘူးသူအဆွဲဆောင်မှုဇာတ်ကောင်ကကျူးလွန်လျှင်မြီးကောင်ပေါက်ရန်လိုသည့်အပြုအမူကိုတုပဖို့ဖို့ပိုများပါတယ်ကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာတူညီတဲ့ပုံစံမီဒီယာအတွက်အရက်၏အပြုသဘောဆောင်သည့်သရုပ်ဖော်ဖို့သက်ဆိုင်သောဖြစ်နိုင်သည်။ ရုပ်မြင်သံကြား, ဂီတဗွီဒီယိုများနှင့်အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်အရက်ကြော်ငြာတွေပိုမိုထိတွေ့မှုအရက်သုံးစွဲခြင်း၏အစောပိုင်းစတင်ခြင်းနောက်ပိုင်းတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်လေးလံဘီယာသောက်ခြင်း (နှင့်အတူအချို့သောလေ့လာမှုတွေအတွက်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်Stacey et al ။ 2004).
အဆိုပါ 10-မှ 15-တစ်နှစ်တာအဘိဓါန် Old ခေတ်-Group မှအတွင်းအရက်သေစာအသုံးပြုမှု
တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအရက်သုံးစွဲခြင်းအပေါ်ကိုယ်စားလှယ်စစ်တမ်းဒေတာ 12 ၏နှစ်အောက်သားသမီးတို့အဘို့မရရှိနိုင်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, တစ်နိုင်ငံလုံးကိုယ်စားလှယ်စစ်တမ်းများတစ်အရေအတွက်, အနာဂတ် (MTF) စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအပါအဝင်မြီးကောင်ပေါက်အသက်အရွယ် 12 နှင့်အထက်ကမူးယစ်ဆေးအသုံးပြုမှုနှင့်ကျန်းမာရေး (NSDUH), နှင့်လူငယ်အန္တရာယ်အပြုအမူ Surveillance စနစ် (အပေါ်အမျိုးသားစစ်တမ်းအရက်သောက်အပေါ်သတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းကြဘူး YRBSS) ။ အဆိုပါ 2005 MTF လေ့လာမှုကနေဒေတာများ (Johnston et al ။ 2006) 41.0th တန်းကျောင်းသူလေး၏ 8 ရာခိုင်နှုန်းသာရှိခဲ့အဖြစ်စစ်တမ်းကောက်ယူ 63.2th တန်းကျောင်းသူလေး၏ 10 ရာခိုင်နှုန်း, သူတို့ရဲ့တစ်သက်တာအတွက်အရက်ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ပြီးခဲ့သည့် 12 လအတွင်းအသုံးပြုရန်ပျံ့နှံ့နှုန်းနှင့်နောက်ဆုံး 30 ရက်ပေါင်း 33.9th တန်းကျောင်းသူလေးအဘို့, အသီးသီး 17.1th တန်းကျောင်းသူလေးနှင့် 8 နှင့် 56.7 ရာခိုင်နှုန်းအသီးသီး, 33.2 နှင့် 10 ရာခိုင်နှုန်းသာရှိကြ၏။ အရသာအရက်အဖျော်ယမကာ (ဥပမာ alcopops) ဒီအသက်အရွယ်-အုပ်စုတစ်စုနှင့်အတူပေါ်ပြူလာဖြစ်ဟန်; 35.5th တန်းကျောင်းသူလေး၏ 8th နှင့် 57.0 ရာခိုင်နှုန်း 10 ရာခိုင်နှုန်းကသူတို့ဘဝအတွက်အချို့သောအချိန်မှာသူတို့ကိုစားသုံးသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ MTF အချက်အလက်များအရ 19.5th တန်းကျောင်းသူလေး၏ 8th တန်းကျောင်းသူလေးနှင့် 42.1 ရာခိုင်နှုန်း 10 ရာခိုင်နှုန်းကသူတို့ရဲ့တစ်သက်တာအတွက်အရက်မူးခဲ့ပွီးလြှငျသိရသည်နှင့် 10.5th တန်းကျောင်းသူလေး၏ 8 ရာခိုင်နှုန်းနှင့် 21th တန်းကျောင်းသူလေး၏ 10 ရာခိုင်နှုန်းအတွက်တစ်ခုတည်းအခါသမယတွင်ငါးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအချိုရည်ကိုလောင်ဘဲလျက်အစီရင်ခံခဲ့သည် နောက်ဆုံး2ရက်သတ္တပတ်။ ဤရွေ့ကား data တွေကိုအစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အကြားအရက်သောက်ထားတဲ့အခွင့်အရေးယူပုံစံအကြံပြုအပ်ပါသည်။ တနည်းအားဖြင့်အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်မသောက်ရသောအခါသူတို့မကြာခဏသောက်ရသောသူတို့၏အမျိုးအအရှိဆုံးနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမသောက်ကြဘူးသော်လည်းအလွန်အကျွံသောက်ပါ။ အရက်သောက်၏ဤပုံစံအထူးသဖြင့်အန္တရာယ်နှင့်ဆိုးရွားစွာကျန်းမာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်။
MTF ကနေစစ်တမ်း data တွေကိုလည်းသဘောထားများနှင့်သဘောထားအမြင်အရက်သေစာအသုံးပြုမှုလျော့နည်းမရရှိခြင်း၏ဆီသို့ဒီအစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်ကာလတစ်လျှောက်ကိုပြောင်းလဲကဖော်ပြသည်။ အရက်ကိုအသုံးပြုခြင်း (တစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုဖြည့်အချိုရည်) ၏အားကြီးသောမရရှိခြင်း၏ 8th တန်းကျောင်းသူလေး (51.2 ရာခိုင်နှုန်း) အကြားအတော်လေး 10th တန်းကျောင်းသူလေး (38.5 ရာခိုင်နှုန်း) တို့တွင်အမြင့်မားတဲ့ဒါပေမယ့်နိမ့်ခဲ့သည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 57.2th တန်းကျောင်းသူလေးနှင့်ထိခိုက်မှုများအတွက် "ကြီးစွာသောအန္တရာယ်" အဖြစ်တကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်အရက်ငါးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအချိုရည်တစ်ဦးချင်းစီတနင်္ဂနွေ rated 8th တန်းကျောင်းသူလေး၏ 53.3 ရာခိုင်နှုန်း 10 ရာခိုင်နှုန်းသာရှိပါသည်။ သို့သော်သူတို့ကလူနီးပါးနေ့တိုင်းနှစျဦးမှအချိုရည်သောက်သုံးခြင်းအားဖြင့် (ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အခြားနည်းလမ်းတွေအတွက်) မိမိတို့ကိုယ်ကိုထိခိုက်စွန်ထင်ဘယ်လောက်အကြောင်းကိုမေးခွန်းထုတ်သောအခါ, 31.4th တန်းကျောင်းသူလေး၏ 8 ရာခိုင်နှုန်းနှင့် 32.6th တန်းကျောင်းသူလေး၏ 10 ရာခိုင်နှုန်းအတိုင်းဤ rated "ကြီးစွာသောအန္တရာယ်။ " ထို့အပြင်ခုနှစ်, 64.2th တန်းကျောင်းသူလေး၏ 8 ရာခိုင်နှုန်းနှင့် 83.7th တန်းကျောင်းသူလေး၏ 10 ရာခိုင်နှုန်းကိုမျှမျှတတလွယ်ကူသောသို့မဟုတ်ရရှိရန်အလွန်လွယ်ကူအဖြစ်အရက် rated (Johnston et al ။ 2006).
ဆယ်ကျော်သက်အရက်သောက်၏အကျိုးဆက်များအပေါ်လေ့လာမှုများကဒီအသက်အရွယ်နုပျိုသောအရွယ်-အုပ်စုတစ်စုအပေါ်အထူးအာရုံစူးစိုက်ကြပြီမဟုတ်ပေမယ့်အချို့အသက်အရွယ်နုပျိုသောဆယ်ကျော်သက်များပါဝင်သည်လုပ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, ယုတ်အသက်အရွယ် 16.9 နှစ်ပေါင်းရှိရာတဦးတည်းထိုကဲ့သို့သောလေ့လာမှုအတွက်မြီးကောင်ပေါက်ထိုကဲ့သို့သောထွက်ဖြတ်သန်းသူတို့ကနောက်နေ့နောင်တအမှုအရာလုပ်နေတာနှင့်တစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်ဦးရန်ပွဲသို့ရတဲ့အဖြစ်, သူတို့ရဲ့အရက်သောက်ခြင်းမှအကျိုးဆက်များတစ်ခုအကွာအဝေးကဖော်ပြခဲ့သည်သူတို့ (မသိခဲ့ပါWindle နှင့် Windle 2005) ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အရက်သုံးစွဲခြင်းကျောင်းကစွမ်းဆောင်ရည်အလျှော့ပေးလိုက်လျောစေခြင်းငှါ, ဆေးရွက်ကြီးနှင့်အတရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲဦးနှောက်၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုမြားတှငျပွောငျးလဲစေနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အရက်သောက်၏အစောပိုင်းစတင်ခြင်းအရက်မှီခိုနှင့်အခြားပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုအပါအဝင်အနာဂတ်ပြဿနာများ, (နှင့်ဆက်စပ်နေသည်Grant ကနှင့် Dawson 1997; Labouvie et al ။ 1997).
အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်များကအရက်ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုလည်း ideation, ကြိုးစားမှုများနှင့်ပြီးစီးမှုအပါအဝင်သတ်သေအပြုအမူတွေတစ်အကွာအဝေး, နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကျောင်းသားကျန်းမာရေးစစ်တမ်းမှအချက်အလက်များကို (Windle et al ။ 1992) ကကြိုးပမ်းခဲ့သောအတိတ် 10 ကျထကျ၌အရက်ကိုမသောက်ရခဲ့ဘူးတဲ့သူ 30th-တန်းအမျိုးသမီးရှောင် (ဆိုလိုသည်မှာ) အကြား, 33.5 ရာခိုင်နှုန်းကိုသတ်သေနှင့် 12.3 ရာခိုင်နှုန်းကိုကျူးလွန်စဉ်းစားခဲ့ကွောငျးဖျောပွသ; ; အလင်းသောက် (ဆိုလိုသည်မှာ, နောက်ဆုံး 30 ရက်အတွင်းတဦးတည်းမှငါးအခါသမယအပေါ်အရက်သောက်သူများ), 52.0 ရာခိုင်နှုန်းကိုသတ်သေနှင့် 21.4 ရာခိုင်နှုန်းကိုစဉ်းစားဖူးပါကကြိုးစားခဲ့ဖူးကြားတွင် နှင့်အလယ်အလတ် / မိုးသည်းထန်စွာသောက်သူတို့တွင် (ဆိုလိုသည်မှာ, နောက်ဆုံး 30 ရက်ပေါင်းခြောက်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအခါသမယအပေါ်သောက်သူများ) 63.1 ရာခိုင်နှုန်းကိုသတ်သေနှင့် 38.8 ရာခိုင်နှုန်းကိုကျူးလွန်စဉ်းစားဖူးပါကကြိုးစားခဲ့ခဲ့သည်။
အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အကြားအရက်သေစာသုံးစွဲမှုကိုလည်း (ဥပမာမျိုးစုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ရှိခြင်း) လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်အန္တရာယ်များလိင်မြားတှငျပါဝငျခွငျးနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ လိင်တက်ကြွဆယ်ကျော်သက်တွေထဲမှာ, အ YRBS လေ့လာမှုမှာ 26.2th တန်းကျောင်းသူလေးနှင့် 9th တန်းကျောင်းသူလေး၏ 21.1 ရာခိုင်နှုန်း 10 ရာခိုင်နှုန်းကို (နောက်ဆုံးလိင်ဆက်ဆံခြင်းမှာအရက်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲမှုအစီရင်ခံတင်ပြEaton et al ။ 2006).
ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုကခက်ခဲအရက်သေစာမှလူ့မြီးကောင်ပေါက်များ၏ဇီဝ sensitivity ကိုဆနျးစစျကြောင်းလေ့လာမှုများဒီဇိုင်းအောင်, သုတေသနရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လူငယ်များမှအရက်ကိုထိန်းချုပ်တားမြစ်။ တစ်ခုတည်းလေ့လာမှုအများအပြားဆယ်စုနှစ်အကြာကောက်ယူသို့သော်, 8 နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးများထံသို့ 15- ml / လူကြီးများအတွက်ကောင်းစွာမူးယစ်အကွာအဝေးအတွင်းခဲ့အထွတ်အထိပ်တို့၏အသွေးအရက်အဆင့်ဆင့် (BALs) သွေးဆောင်ရာစင်ကြယ်သောအီသနော, ကီလိုဂရမ် 0.5 တစ်ထိုးပေးခဲ့ (Eckardt et al ။ 1998) ။ သို့သျောလညျး, သုတေသီ (Behar et al ။ 1983) သူတို့လူကြီးများအတွက်မူးယစ်စေလိမ့်မယ်လို့အရက်တစ်ထိုးလက်ခံရရှိပြီးမှအနည်းငယ်စုစုပေါင်းအမူအကျင့်ပြောင်းလဲမှုကလေးများတွင်ဖြစ်ပွားသည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်အဲဒီလူငယ်အတွက်မူးယစ်မရှိအပြုအမူဆိုင်းဘုတ်များတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
နောက်ဆက်တွဲတိရိစ္ဆာန်သုတေသနမြီးကောင်ပေါက်မော်တာချွတ်ယွင်းအပေါ်အရက်ရဲ့သက်ရောက်မှုမှအတော်လေးအာရုံမခံစားနိုင်သောသောလေ့လာရေးအဘို့အထောကျပံ့ပေးခဲ့ပါသည်။ လေ့လာရေးလည်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တိရစ္ဆာန်များပြပွဲလူမှုရေးချွတ်ယွင်းခြင်းနှင့်သက်သာခြင်း (အပါအဝင်စားသုံးမှုကန့်သတ်နိုင်ဖို့တွေကိုအဖြစ်အစေခံနိုငျသောအရက်၏အခြားဆိုးကျိုးများမှ sensitivity ကိုလျော့နည်းသွားကြောင်းပြသလှံတော်နှင့် Varlinskaya 2005) ။ ထို့ပြင်၎င်းတို့သည်အချို့သော postintoxication "ရက်နာ" သက်ရောက်မှု (နည်းအထိခိုက်မခံများမှာDoremus et al ။ 2003) ။ အရက်ဤအာရုံမခံစားနိုင်သောအထူးသဖြင့် (မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏အစောပိုင်းအဆင့်စဉ်အတွင်းအသံထွက်စေခြင်းငှါVarlinskaya နှင့်လှံ 2004).
အရက်၏ဆန္ဒရှိဆိုးကျိုးများအများအပြား၎င်းတို့၏ဆွေမျိုးအာရုံမခံစားနိုင်သောမတူဘဲ, ဆယ်ကျော်သက်တိရိစ္ဆာန်များနှိမ့်ချဆေးများ (မှာမြင်ပြီလူမှုရေးပံ့ပိုးအပါအဝင်ယင်း၏ပျြောမှေ့စသက်ရောက်မှုအချို့မှလူကြီးများထက် ပို. အထိခိုက်မခံများမှာVarlinskaya နှင့်လှံ 2002) ။ လူသားမြားသညျဤရလဒ် Extrapolating အရက်၏ပျြောမှေ့စအကျိုးသက်ရောက်မှုများပိုမို sensitivity ကိုနဲ့ပေါင်းပြီး, မြီးကောင်ပေါက်၌သောက်၏အတော်လေးမြင့်မားအားပေးစခွေငျးငှါသူတို့၏စားသုံးမှုကန့်သတ်ရန်မှလူကြီးများအတွက်တွေကိုအဖြစ်အစေခံစေခြင်းငှါအရက်၏ဆိုးကျိုးမှအောက်ပိုင်း sensitivity ကိုကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ဒီအကြိုးသကျရော, စိတျအပိုငျးအတွက်, လူ့မြီးကောင်ပေါက်အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာမူးရူးသောက်စား၏မြင့်အဆင့်ဆင့်ရှင်းပြစေခြင်းငှါ (ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးမှုနှင့်စိတ်ကျန်းမာရေးန်ဆောင်မှုများအုပ်ချုပ်ရေး 2003).
မှတ်စု၏, အရက်တစ်မိသားစုသမိုင်းနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကိုလည်း (အရက်မှီခိုဘို့မိမိတို့ပိုမိုမြင့်မားအန္တရာယ်ရှင်းပြရသော, အရက်နည်းအထိခိုက်မခံများမှာSchuckit et al ။ 2004) ။ အရက်သမား၏သားသမီးတို့အဘို့, ဒီအာရုံမခံစားနိုင်သောမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအရက်သေစာစားသုံးမှုမြင့်မားဘို့မိမိတို့အန္တရာယ်မားစေလိမ့်မည်။
အရက်၏ pharmacological ဆိုးကျိုးများအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုအပြင်, ဆယ်ကျော်သက်တိရိစ္ဆာန်များ (ဦးနှောက် plasticity နှင့်မှတ်ဉာဏ်အပေါ်အရက်-related သက်ရောက်မှုမှလူကြီးများထက် ပို. အားနည်းချက်ရှိပါတယ်အဖြူနှင့်အ Swartzwelder 2005), အဆုံးစွန်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုအဖြစ်ကောင်းစွာလူ့မြီးကောင်ပေါက်အစီရင်ခံနှင့်အတူ (Acheson et al ။ 1998) ။ အရက်၏ထိတွေ့ခြင်းa"ကိုမူးရူး" မော်ဒယ်ကို အသုံးပြု. ကြွက်လေ့လာမှုများကနေနောက်ထပ်-ပိုသက်သေအထောက်အထား (မြီးကောင်ပေါက်အဆိုပါတိုကျရိုကျ cortex အပါအဝင်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဒေသများအတွက်ဦးနှောက်ပျက်စီးမှုမှလူကြီးများထက် ပို. အားနည်းချက်ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုသင်္ဘောသား et al ။ 2000) ။ ဒီလေ့လာမှုတွေကဆယ်ကျော်သက်အရက်ထိတွေ့တိရိစ္ဆာန်များအတွက်အာရုံကြောနဲ့အပြုအမူ function ကိုအပေါ်အကျိုးဆက်များတည်တံ့ရှိသည်ဟုနိုင်မပြသခဲ့ကြသည်။
အရက်ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ထိတွေ့၏ Developmental Related အကျိုးသက်ရောက်မှု
တိရိစ္ဆာန်သုတေသနဆယ်ကျော်သက်အရက်သောက်ဟော်မုန်းပမာဏထိခိုက်စေသောပြသခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အရက်မှစူးရှသောထိတွေ့မှုအစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၌ (အထီးကြွက်များတွင် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုတိုးပွါးLittle က et al ။ 1992), (Mid-မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှာ testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုမအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်Tentler et al ။ 1997), နှင့် postadolescent နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုဖိနှိပ် (Little က et al ။ 1992; Tentler et al ။ 1997) ။ (အပိုဆောင်းတိရိစ္ဆာန်သုတေသနအစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအရက်သေစာမှနာတာရှည်ထိတွေ့အပျိုဖော်ဝင်-ဆက်နွယ်ဟော်မုန်းပမာဏနှင့် pubertal အချိန်ကိုက်ပွောငျးလဲကြောင်းပြသထားပါတယ်ဒါပေမယ့်သက်ရောက်မှုယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းအတွက်ကွဲပြားခြားနားဖြစ်ကြောင်းcicero et al ။ 1990; Emanuele et al ။ 2002; ကူးတို့ et al ။ 1998; ဟာနန်ဒက်ဇ်-Gonzalez နှင့်ရေ့စ် 2000; Hiney et al ။ 1999; Dees et al ။ 1990).
နှစ်ဦးစလုံးအလားအလာများနှင့်နောက်ကြောင်းပြန်လူ့လေ့လာမှုများ (အရက်သောက်၏အစောပိုင်းစတင်မှီခိုအပါအဝင်အရက်သေစာနှင့်အတူနောက်ပိုင်းတွင်ပြဿနာများ, နှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းညွှန်ပြနှင့်အခြားတ္ထုများအလွဲသုံးစားမှုGrant ကနှင့် Dawson 1997; Labouvie et al ။ 1997) ။ ဥပမာ, တစ်နိုင်ငံလုံးကိုယ်စားလှယ်စစ်တမ်း 40 များ၏အသက်အရွယ်လည်းအစီရင်ခံတင်ပြသူကိုတစ်ဦးချင်းစီ၏ 15 ရာခိုင်နှုန်းခန့်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါအရက်မှီခိုတဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုနှင့်ကိုက်ညီနေတဲ့ထုံးစံ၌မိမိတို့၏အသက်တာ၌တစ်ချိန်ချိန်ကသူတို့အရက်သောက်အပြုအမူဖော်ပြထားမတိုင်မီတစ်ဦးချင်းစီ၏ 10 ရာခိုင်နှုန်းကိုသောက်သုံးခြင်းကဖော်ပြခဲ့သည်သူပြသ အသက်အရွယ် 21 မှာသို့မဟုတ်နောက်ပိုင်း (သောက်စတင်Grant ကနှင့် Dawson 1997) ။ ဒါဟာအစောပိုင်းအရက်သေစာအသုံးပြုမှုနောက်ပိုင်းတွင်ပြဿနာအသုံးပြုမှုတိုက်ရိုက်အကြောင်းမရှိသို့မဟုတ်သာများအတွက်အမှတ်အသားအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းရှိမရှိ, သို့သော်, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး။
တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များကို အသုံးပြု. သုတေသနလေ့လာမှုများတစ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဆက်ဆံရေးဟာအစောပိုင်းအရက်ထိတွေ့မှုများနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်အရက်သောက်များအကြားနှင့်အရက်မှဆယ်ကျော်သက်ထိတွေ့ neurobehavioral အကျိုးဆက်များတည်တံ့ထားပါတယ်ရှိမရှိတည်ရှိခြင်းရှိမရှိလေ့လာစူးစမ်းဖို့စတင်ပါပြီ။ ဤအချိန်တွင်တွေ့ရှိချက်ရောစပ်ကြသည် (လှံကို 2002) ။ အချို့လေ့လာမှုတွေမှာတော့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းမိမိဆန္ဒအလျောက်အရက်သုံးစွဲမှုအရွယ်ရောက်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်အရက်-related အပြုအမူထိခိုက်ခဲ့သည်။ အရွယ်ရောက်တိရိစ္ဆာန်များရေသို့မဟုတ်အရက်တစ်ရွေးချယ်မှုပေးခဲ့သည့်အခါဥပမာ, သူတို့အရက်ကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းအရက်နှင့်ထိတွေ့အရွယ်ရောက်တိရိစ္ဆာန်များ (relapse တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားဖြစ်နိုင်ခြေ "တဏှာ" အပြုအမူတစ်ခုတိုးပြသခဲ့သည်McBride et al ။ 2005), နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန် သာ. ကွီးမွတျအရက်စားသုံးမှု (Siegmund et al ။ 2005) ။ တိရစ္ဆာန်များအတွက်, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအရက်သေစာမှနာတာရှည်ထိတွေ့မှု (ထိုသက်သာစေသောဆေးဖို့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်-ဆက်စပ်အာရုံမခံစားနိုင်သော "တွင်တံဆိပ်ခေါင်းများက" အချိန်ကြာမြင့်စွာတည်တံ့သည်းခံစိတ် inducesSlawecki 2002) နှင့်မော်တာ-impairing (အဖြူရောင် et al ။ 2000အရက်၏) သက်ရောက်မှုများ။ ဤသည်သည်းခံစိတ်လူကြီးသို့ဆက်ရှိနေသေးနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအရက်အသုံးပြုမှုမြင့်မားဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့တိရစ္ဆာန်သုတေသနအရက်စောစောထိတွေ့မှုနောက်ပိုင်းမှာအလွဲသုံးစားမှုများအတွက် propensity တိုးမြှင့်ကြောင်းရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြစ်ပေါ်စေဆယ်ကျော်သက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များပြောင်းလဲစေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်ခြေအကြံပြုထားသည်။ ဒီအယူအဆနှင့်ကိုက်ညီ, လူ့လေ့လာမှုများ (မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းနာတာရှည်မိုးသည်းထန်စွာအရက်သေစာသုံးစွဲခြင်းကဦးနှောက်လုပ်ဆောင်မှုအတွက်သိမြင်မှုလိုငွေပြမှုနှင့်ပွောငျးလဲနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းပြသTapert နှင့် Schweinsburg 2005) နှင့် shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန် (de ဝမ်း et al ။ 2000) ။ ဒါဟာ (သူတို့ကြိုတင်သောက်သုံး၏စတင်နိုင်ဖို့ပစ္စုပ္ပန်တို့တကယ်တော့အရက်၏နာတာရှည်, မိုးသည်းထန်စွာအသုံးပြုရန်လှူဒါန်းခဲ့ကြပေမည်ရှိမရှိ, ဤ neurocognitive လိုငွေပြမှုအရက်သောက်သူ့ဟာသူထံမှဖြစ်ပေါ်ခြင်းရှိမရှိမသိရသေးသို့မဟုတ်ဟေးလ် 2004).
မှီခိုအပါအဝင်အစောပိုင်းအရက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်အရက်ပြဿနာများအကြားဆက်ဆံရေး, စဉ်းစားတဲ့အခါ, သူကအများကြီးလမ်းကြောင်းပြဿနာအရက်အသုံးပြုမှုကိုဦးတည်သွားစေနိုင်သည်ကိုမှတ်မိဖို့ကအရေးကြီးတယ်။ ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အကြားအရက်သေစာသုံးစွဲခြင်း၏အန္တရာယ်တိုးမြှင့်ကြောင်းတိကျတဲ့နှင့် nonspecific အချက်များတစ်ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေး (ဖော်ထုတ်ထားပြီးHawkins က et al ။ 1992; Windle 1999) ။ Nonspecific အန္တရာယ်အချက်များအရက်သုံးစွဲခြင်း, ပြဿနာသောက်သုံးရေနှင့်အရက်သေစာအသုံးပြုမှုမမှန်အပြင် psychopathology နှင့်ပြဿနာအပြုအမူတွေအများအပြားပုံစံများ (ဥပမာ externalizing မမှန်ခြင်းနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေနှင့်စိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန်) ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါသူတို့သည်ပညာမရှိကြ။ တိကျသောအန္တရာယ်အချက်များအရက်အသုံးပြုမှုကိုတိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေပါတယ်သောသူတို့ဖြစ်ကြသည်။ တစ်ခုတည်းသောတိကျတဲ့သို့မဟုတ် nonspecific အချက်အဘယ်သူမျှမတစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအရက်-related အပြုအမူတွေကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ပါ။ အဲဒီအစားအချက်များပေါင်းစပ်အရက်အတူပြဿနာရလဒ်များကြိုတင်ခန့်မှန်းလေ့ရှိပါတယ်။ မျိုးစုံအန္တရာယ်အချက်များအရက်အသုံးပြုရန်ရှိပါတယ်သကဲ့သို့အန္တရာယ်လျော့ပါးကြောင်းအကာအကွယ်အချက်များတစ်အကွာအဝေး (ရှိပါတယ်Werner နှင့်စမစ် 1992).
nonspecific အန္တရာယ်အချက်များ (ဥပမာ, ဇီဝဗေဒစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ယဉ်ကျေးမှု) ၏ဆွေမျိုးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတစ်ဦးချင်းစီကိုဖြတ်ပြီးနှင့်အတူတူပင်တစ်ဦးချင်းအတွင်းနှစ်ဦးစလုံးကွဲပြားခြားနားသည်။
စိတ်ခံစားမှု reactivity ကိုနှင့်အပြုအမူ၏စည်းမျဉ်းဆက်စပ်ကြောင်းစိတ်ထားနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏ attribute တွေဗီဇသြဇာလွှမ်းမိုးမှုနေကြတယ်, အစောပိုင်းပေါ်လာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်တည်ငြိမ်ဖြစ်ကြသည်။ မွေးဖွား-to-အသက်အရွယ် 10 အသက်အရွယ်-အုပ်စုတစ်စုနှင့်အတူအမျှပိုပြီးခက်ခဲစိတ်ထား (ပိုမိုမြင့်မားလှုပ်ရှားမှုအဆင့်ဆင့်ပြအဖြစ်သတ်မှတ်, နိမ့်တာဝန်တိမ်းညွတ်, တရားရှိဖို့, တစ်ဦးဆုတ်ခွာတိမ်းညွတ်များနှင့်အနိမ့်အပြုသဘောဆောင်တဲ့ခံစားချက်) အပါအဝင်ဤအ attribute တွေအတော်များများ, မြင့်မားသောအသစ်အဆန်းရှာ; မြင့်မားတဲ့ဆုလာဘ်မှီခို; အနိမ့်အန္တရာယ်ရှောင်ရှားခြင်း, ကျူးကျော်; နှင့်အမူအကျင့် undercontrol (ဥပမာဆိုးသွမ်းလှုပ်ရှားမှု, Impulse နှင့်အခက်အခဲဟန့်တားတုံ့ပြန်မှု) အစောပိုင်းတွင်အရက်သောက်များစတင်ခြင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူကြီးအတွက်နှစ်ဦးစလုံးအရက်ပြဿနာများ၏မြင့်မားတဲ့အဆင့်အတန်းများနှင့်နောက်ဆက်တွဲပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့် comorbid စိတ်ရောဂါမမှန် (ခန့်မှန်းဘရောင်း et al ။ 1996; ပုံတူပွားခြင်း et al ။ 1988; Dobkin et al ။ 1995; ဂျွန်ဆင် et al ။ 1995; Tubman နှင့် Windle 1995; Zucker 2006).
အချို့မိသားစုဝိသေသလက္ခဏာများဆယ်ကျော်သက်အရက်အသုံးပြုမှုပိုမိုမြင့်မားအဆင့်ဆင့်နှင့်အခြားပြဿနာအပြုအမူတွေကို (နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်Hawkins က et al ။ 1992) ။ ဥပမာအားဖြင့်, သာ. ကြီးမြတ်အိမ်ထောင်ရေးပဋိပက္ခနှင့်မကျေနပ်မှု (အသေးစိတ်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအရက်သေစာအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်Windle 1999) ။ အလားတူပဲ, မိသားစုအတွင်းစိတ်ဖိစီးဖြစ်ရပ်များနှင့်အကြမ်းဖက်မှု (ဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးအရက်သုံးစွဲခြင်း၏အစောပိုင်းစတင်ခြင်းနှင့်ပိုပြီးမကြာခဏနှင့်လေးလံအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်Werner နှင့်စမစ် 1992).
Developmental လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် Dyssynchronies
စံချိန်စံညွှန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာတိကျသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များပုံမှန်အားဖြင့်အချို့အသက်အရွယ်အပိုင်းအခြားအတွင်းပေါ်ပေါက်သောအယူအဆကိုရည်ညွှန်းသည်။ Nonnormative ဖှံ့ဖွိုးတိုးတတူညီတဲ့အသက်အရွယ် / -sex ရွယ်တူချင်းအများစု၏ထံမှကစာရင်းအင်းကွဲပြားခြားနားကြောင်းကိုဖွံ့ဖြိုးမှုကိုရည်ညွှန်းသည်။ ပေးထားသောအသက်အပိုင်းအခြားအတွင်းမှာပဲအများဆုံးအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲအဓိကဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာနှောင့်နှေးရောင်ပြန်ဟပ်သို့မဟုတ်ပြင်းထန်စွာအနာဂတ်ရလဒ်များ impact ဖွယ်ရှိမဟုတ်ပါဘူး။ အချို့သောတစ်ဦးချင်းစီအတွက်, သို့သော်, ချွတ်အချိန်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ nonnormative ဘယ်နေရာတွေမှာအထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။ အသက်မပြည့်သေးအရက်သောက်ဖို့သက်ဆိုင်ရာကြောင်းကိုဥပမာတစ်ခုကသူတို့ရဲ့ရွယ်တူချင်းအများစုမှဆွေမျိုးတချို့မိန်းကလေးတွေ၏အစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရငျ့ဖြစ်ပါတယ်။ အခြို့သောအဘို့, သိမြင်မှုနှင့်လူမှုရေးကျွမ်းကျင်မှုအတူတူအရှိန်အဟုန်မှာဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းမည်မဟုတ်ပါ။ ရလဒ်အဖြစ်ဤငယ်ရွယ်မိန်းကလေးငယ်များ, အဟောင်းတွေယောက်ျားလေးများနှင့်အတူမိမိတို့၏အသင်းအဖွဲ့မှတဆင့်, ထိုကဲ့သို့သောသောက်ရသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအတွင်းထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဖိအားပေးခံနေရအဖြစ်သူတို့ကိုင်တွယ်ရန်ပြင်ဆင်ထားမဟုတ်အခြေအနေများအတွက်မိမိတို့ကိုယ်ကိုရှာတွေ့လိမ့်မည်။
တစ်ဦးကဇီဝဗေဒဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ရှုပ်ထွေးသောဆက်စပ်မှုတွေ, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်ဆံရေးနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လူမှုရေးပတ်ဝန်းကျင်မှာလူကြီးတစ်ဦးတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ထူးခြားတဲ့လမ်းကြောင်းဆုံးဖြတ်သည်။ မြီးကောင်ပေါက်ရင့်ကျက်အဖြစ်, သူတို့လူမှုရေးဆက်ဆံရေးနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်မှာရွေးချယ်ရာတွင်အတွက်ပိုမိုတက်ကြွစွာအခန်းကဏ္ဍ, ဤရွေးချယ်မှုဟာသူတို့ရဲ့စွန့်စားမှုနှင့် / သို့မဟုတ်အရက်အသုံးပြုမှုအတွက်အကာအကွယ်အချက်များတိုးမြှင့်။ ကြားဝင်အပါအဝင်အပြုသဘောဆောင်တဲ့လမ်းကြောင်းနှင့်ရလဒ်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်လုပ်ရပ်များ, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ရောင်စဉ်ကိုဖြတ်ပြီးအနုတ်လက္ခဏာလမ်းကြောင်း redirect နိုင်ပါတယ်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်သောအရာကိုတစ်ဦးနားလည်မှုအလွန်အရေးကြီးသည်။
အခြို့သောကဒေါသ attribute တွေအရက်-related အပြုအမူတွေများအတွက်အန္တရာယ်အချက်များဖြစ်နိုငျသကဲ့သို့, အခြားသူများအကာအကွယ်ရှိနိုင်ပါသည်။ မိဘများ alcoholabusing ၏အနိမ့်လူမှုစီးပွားရေးသားသမီးများ၏တစ်ဦး longitudinal လေ့လာမှုမှာသုတေသီ cuddly, ချစ်ခင်မွေးကင်းစနှင့်ကလေးငယ်များ (မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူကြီးအတွက်အရက်-related ရလဒ်များများအတွက်လျော့နည်းသွားအန္တရာယ်ခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံWerner နှင့်စမစ် 1992) ။ ထိုကဲ့သို့သောစရိုက်နှင့်အတူကလေးများအပြုသဘောဆောင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်ရာအားကောင်းနှင့်ပိုပြီးမကြာခဏလူမှုရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှု, ထုတ်ယူနိုင်ရန်ထင်နေကြသည်။
ယာနျဘာသာတရားကိုမကြာခဏ၏အစောပိုင်းစတင်ခြင်းဆန့်ကျင်တဲ့ကြားခံအဖြစ်ဖော်ထုတ်နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်တိုးတက်မှုရန်, လေးနက်အရက်သေစာပါဝင်ပတ်သက်မှုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် se နှုန်းစျယာနျဘာသာတရားကိုအားကောင်းတဲ့မိသားစုဆက်ဆံရေးနှင့်ရပ်ရွာဆက်ဆံမှုတစ်ခုရောင်ပြန်ဟပ်မှုထက်တစ်အကာအကွယ်အချက်သူ့ဟာသူပိုဖြစ်နိုင်သည်။
positive မိဘစိတ်ထားနှင့်အကောင်းမိဘအုပ်ထိန်းဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအရက်သေစာအသုံးပြုမှုအတွက်အန္တရာယ်ဆန့်ကျင်ကလေးတစ်ဦးအိပ်ရေးဝြခင်းနိုင်ပါတယ်။ မိဘအုပ်ထိန်းအလေ့အကျင့်လေးကိုသက်ဆိုင်ရာ domains များမိဘပါဝင်ပတ်သက်မှု၏အဆင့်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်ပြီးထားတဲ့မြီးကောင်ပေါက်အောက်ပါတို့အပါအဝင်မိဘစံချိန်စံညွှန်း, (Internalize အတွင်းရန်အဒီဂရီကိုသြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါလူအပေါင်းတို့ရာ၏, ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြWindle et al ။ 2008):
မိဘပွား (စိတ်ခံစားမှုနွေးထွေးမှုနှင့်ထောက်ခံမှုများဆိုလိုသည်မှာအဆင့်) ။ ပွားများပိုမိုမြင့်မားသောအဆင့်အတန်းတသမတ်တည်းဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအရက်သေစာအသုံးပြုမှုအောက်ပိုင်းအဆင့်ဆင့်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်နေကြသည်။ ပိုဂရုစိုက်တတ်တဲ့သက်ဆိုင်ရာများနှင့်ထောက်ခံအဖြစ်၎င်းတို့၏မိဘများရှုမြင်သူကိုမြီးကောင်ပေါက်အရက်အသုံးပြုမှုစတင်နှောင့်နှေးခြင်းနှင့်မကျင့်သောသူအဆယ်ကျော်သက်ထက်လျော့နည်းအရက်လောင်လေ့ရှိပါတယ်။
မိဘအုပ်ထိန်းသူစောင့်ကြည့်မှု (ဆိုလိုသည်မှာဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအကငျြ့ဘို့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုထူထောင်နှင့်ပြဋ္ဌာန်း) ။ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး၏အဆင့်မြင့်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအရက်သေစာအသုံးပြုမှုအောက်ပိုင်းအဆင့်ဆင့်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်နေကြသည်။ မိဘများထိုကဲ့သို့သောညဘက်နှင့်တစ်နေ့လျှင်လေ့လာမှုနာရီနိမ့်ဆုံးအရေအတွက်ကအဖြစ်, ဆယ်ကျော်သက်အပြုအမူများအတွက်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့နယ်နိမိတ်တည်ထောင်ရန်လိုက်တဲ့အခါ, သူတို့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ခြင်းနှင့်တသမတ်တည်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုချိုးဖောက်ဘို့အကျိုးဆက်များပြဋ္ဌာန်းရန်အခါ, ဆယ်ကျော်သက်နောက်ပိုင်းမှာအရက်အသုံးပြုမှုကိုအစပျိုးရန်နှင့်လျော့နည်းမကြာခဏအရက်လောင်လေ့ရှိပါတယ်။
ရှေ့ nonspecific အန္တရာယ်နှင့်အကာအကွယ်အချက်များပြဿနာအပြုအမူတွေတစ်အရေအတွက်ဆက်စပ်သွားရမည်အကြောင်း, အရက်-တိကျတဲ့အချက်အရက်အသုံးပြုမှုကိုတိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းအချက်များတစ်အမျိုးမျိုးဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။
အရက်တစ်မိသားစုသမိုင်း (ထိုအမျိုးအနွယ်ထဲမှာအရက်၏အန္တရာယ်ကိုတိုးပွားစေစယ် 1990) ။ လေ့လာမှုတစ်ခုသမီးတို့အနေနဲ့ AUD ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့နှစ်ခုမှသုံးဆပိုများပါတယ်သော်လည်းအထီးအရက်သမားသားတို့, nonalcoholic လူသားတို့ထက်တစ်ဦးအရက်သုံးစွဲခြင်းရောဂါ (AUD) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ပိုပြီးလေးကိုးကြိမ်ဖြစ်ကြောင်းခန့်မှန်းပါတယ်။ မွေးစားခြင်းနှင့်အမွှာနှင့်အတူသုတေသနလေ့လာမှုများကိုလည်း AUDs ရန်မျိုးဗီဇဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ အရက်တစ်မိသားစုသမိုင်းအစအစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်အရက်အသုံးပြုခြင်းနှင့် deviant အပြုအမူများပိုမိုမြင့်မားအဆင့်ဆင့်နှင့်အရက်သေစာသုံးစွဲခြင်း၏အစောပိုင်းစတင်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
မိသားစုအတွင်းအရက်သေစာသုံးစွဲခြင်းကတည်ငြိမ်, စိတ်လှုပ်ရှားမှုထောက်ခံမိသားစုပတ်ဝန်းကျင်၏တည်ရှိမှုအားနည်းစေပြီးအထူးသဖြင့်လာသောအခါဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအရက်သေစာအသုံးပြုမှုအဆင့်နဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ အရက်စွဲမိဘ, မိဘအုပ်ထိန်းအတွက်မကိုက်ညီနှင့်အတူမိသားစုများအတွက်; အိမ်ထောင်ရေးပဋိပက္ခ; ဇနီးယောင်္ကျားနှင့်ကလေးအလွဲသုံးစားမှု; နှင့်ဘဏ္ဍာရေး strain အပါအဝင်စုစုပေါင်းစိတ်ဖိစီးမှု, ဘုံဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကားအချက်များအစောပိုင်းကသောက်သုံးရေနှင့်၎င်းတို့၏နေအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်မှလွတ်မြောက်ရန်ရှာကြံမြီးကောင်ပေါက်များက သာ. ကြီးအရက်ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ မကြာခဏဆိုသလိုအဲဒီလူငယ်အိမ်မှာချို့တဲ့သည့်လူမှုရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုပေးပို deviant သက်တူရွယ်တူအုပ်စုကြည့်ရှုပါ။
သုတေသနအဟောင်းတွေမောင်နှမအခန်းကဏ္ဍမော်ဒယ်များအဖြစ်ဆောင်ရွက်ကြောင်းပြသထားတယ်နှင့်၎င်းတို့၏အငယ်မောင်နှမများ၏သောက်သုံးရေအပြုအမူကိုသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးအသက် 508-11 နှင့်အဟောင်းမှေးခငျြးမြားနှငျ့ 13 မိသားစုများ၏လေ့လာမှုတစ်ခုအသက် 14-18 (ထိုအဟောင်းများနှင့်အငယ်မောင်နှမ '' အရက်ကိုအသုံးပြုခြင်းအကြားသိသာထင်ရှားသောအသင်းအဖွဲ့များကိုတွေ့ဆေးထိုးအပ် et al ။ 1986) ။ အဟောင်းတွေမောင်နှမအတိတ်နှစျတှငျအရက်ကိုအသုံးပြုမမူလျှင်, မိမိတို့၏အသက်ငယ်မောင်နှမထက်ပို 90 ရာခိုင်နှုန်းကိုသူတို့ကအတိတ်ကာလတစ်နှစ်အတွင်းကိုမသောက်ခဲ့ဘူးသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ , အခြားတစ်ဖက်တွင်, အဟောင်းတွေမောင်နှမအတိတ်နှစျတှငျအရက် 20 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအဆကို အသုံးပြု. သတင်းပေးပို့လိုလျှင်, မိမိတို့၏အသက်ငယ်မောင်နှမ၏ 25 ထက်ပိုရာခိုင်နှုန်းကသောက်ရေကဖော်ပြခဲ့သည်။
ရွယ်တူချင်းလွှမ်းမိုးမှုဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦး၏ကနဦးသက်တူရွယ်တူရွေးချယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အုပ်စုနှင့်အတူနောက်ဆက်တွဲအပြန်အလှန်လူမှုဆက်ဆံရေးကနေဖြစ်ပေါ်ဖို့ပေါ်လာပါသည်။ ရွယ်တူချင်းရွေးချယ်ရေးကျပန်းဖြစ်စဉ်ကိုမျှမက, အစား, မြီးကောင်ပေါက်ဘုံအကျိုးစီးပွားနှင့်လှုပ်ရှားမှုများအပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦးရွယ်တူအုပ်စုတစ်စုကိုရွေးပါ။ ရှုပ်ထွေးသော interaction ကတစ်စီးရီးတဆင့်သူတို့ကအုပ်စုတစ်စုနှင့်အတူဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါသည်တစ်ခုသို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောတဦးတည်းမှရွှေ့။ ဤရွေ့ကားဖြစ်စဉ်များဘုံအကျိုးစီးပွားအပြုသဘောရေးရာသို့မဟုတ် deviant လှုပ်ရှားမှုများပါဝင်ရှိမရှိအတူတူပါပဲ။
ရွယ်တူချင်းသြဇာလွှမ်းမိုးမှုဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအရက်သေစာအသုံးပြုမှုအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ တကယ်တော့, မိတ်ဆွေများ alcoholusing ၏နံပါတ်သို့မဟုတ်ရာခိုင်နှုန်းဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးရဲ့အရက်ကိုအသုံးပြုခြင်း၏အများဆုံးဖြစ်ပွားခန့်မှန်းသည်။ တစ်သက်တူရွယ်တူအုပ်စုသည်အရက်နှင့်အတူစမ်းသပ်ချက်သို့မဟုတ်ယင်း၏အသုံးပြုမှုကိုအရှိန်တဲ့အခါမှာအခြားအဖွဲ့ဝင်များအုပ်စုထဲက drop ဖို့ရွေးချယ်စေခြင်းငှါသော်လည်းအချို့သောအဖွဲ့ဝင်များ၏သက်တူရွယ်တူနှောင်ကြိုး, ကိုခိုင်ခံ့စေခြင်းဖြစ်သည်။
သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံများအပေါ်အခြေခံပြီး, လူတွေပုံမှန် (အရက်သောက်အရက်အပါအဝင်၎င်းတို့၏အပြုအမူများ၏ဖွယ်ရှိအကျိုးဆက်များအကြောင်းကိုမျှော်လင့်ချက်များဖွဲ့စည်းTolman ၁၉၃၂) ။ မျှော်လင့်ချက်များ, သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအပြုအမူအဖြစ်သိပ္ပံပညာရှင်များအားဖြင့်ရည်ညွှန်းသည်ဤမျှော်လင့်ချက်များ, အပြုသဘောသို့မဟုတ်အပျက်သဘောဖြစ်, နှင့်အချိန်ကျော်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲစေခြင်းငှါ (Bolles ၁၉၇၂; MacCorquodale နှင့် Meehl 1953; Tolman ၁၉၃၂).
အရက်၏အသိအမြင်အရက်ကိုမျှော်လင့်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းသို့အစောပိုင်းနှင့်အချက်များဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ တဦးတည်းလေ့လာမှုတစ်ခုအဖျော်ယမကာသောက်သုံးခြင်းလူကြီးများ၏ရုပ်ပုံကိုပြသနေသောအသက်အရွယ် 3-5 သကဲ့သို့ကလေးငယ်များမကြာခဏလူကြီးများအရက်စားသုံးခဲ့မှန်းဆ။ ပုံအရွယ်ရောက်အရက်ကိုသောက်လျက်နေကြယူဆသူများသည်ကလေးများ (9 နှစ်ကြာပြီးနောက်သူတို့ကိုယ်သူတို့သောက်သုံးခံရဖို့ကပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်ဒိုနိုဗန် et al ။ 2004) ။ တခြားလေ့လာမှုအသက်အရွယ်9သို့မဟုတ် 10 အသုံးပြုပုံအများဆုံးကလေးများယေဘုယျအားဖြင့်အနုတ်လက္ခဏာဖြစ်သောအရက်ကိုအသုံးပြုပြီးန်းကျင်ကိုမျှော်လင့်, (Dunn နှင့် Goldman ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပြီညွှန်ပြ 1996, 1998, 2000; Kraus et al ။ 1994; Miller က et al ။ 1990) ။ အနည်းငယ်အဟောင်းသားတို့နှင့်အတူလေ့လာရေးသူတို့ကပိုအပြုသဘောမျှော်လင့်ထား (Dunn နှင့် Goldman ထောက်ခံမှတော်မှာကြောင်းပြသ 1996, 1998; Kraus et al ။ 1994; Miller က et al ။ 1990) ။ ထို့ပြင်လေ့လာမှုများ၏နံပါတ် (ကအစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်အရက်နှင့် ပတ်သက်. မျှော်လင့်ထားများအကြားဆက်စပ်မှုနှင့်လက်ရှိနှင့်အနာဂတ်နှစ်ဦးစလုံးအရက်သောက်အပြုအမူတွေပြသကြChristiansen et al ။ 1989; Goldberg et al ။ 2002; Smith က 1994; Smith က et al ။ 1995).
အကွိမျမြားစှာအချက်များအရက်တစ်မိသားစုသမိုင်းအပါအဝင်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုမျှော်လင့်ထား, မိဘသောက်သုံးရေအဆင့်ဆင့်, အရက်အတူအစောပိုင်းအတွေ့အကြုံ, ရွယ်တူ '' အရက်သောက်၏သဘောထားအမြင်, ပုံမှန်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုသောက် (ဆိုလိုသည်မှာ, အားကစားသမား, လူကြိုက်များကျောင်းသား, loner, ဆိုးသွမ်း, etc) ၏ရိပ်မိကျပုံစံပုံဖော်, နှင့်တစ်ဦးချင်းရဲ့ကြိုတင်သောက်သုံးအတွေ့အကြုံကို (Oullette et al ။ 1999; Smith က 1994) ။ preadolescents နှင့်အတူသုတေသန (သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်များအာရုံစူးစိုက်ကြားဝင်မှတဆင့်ပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်ဆိုတာကိုပြသCruz နှင့် Dunn 2003; Kraus et al ။ 1994) ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအချက်များလည်း (High-အန္တရာယ်မျှော်လင့်ထား၏ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုသြဇာလွှမ်းမိုးAnderson က et al ။ 2003; ဆက်မက်ကာသီ et al ။ 2001a,b; Smith ကနှင့်အန်ဒါဆင် 2001; Smith က et al ။ 2006).
အသက်အရွယ် 10 ထံမှ 15 ဖို့ကာလဆယ်ကျော်သက်ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေးနှင့် relational အခင်းအကျင်းအတွက်အဖြစ်, ဇီဝဗေဒသိမြင်မှု, စိတျပိုငျးဆိုငျရာ, လူမှုရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်သိသာထင်ရှားသောအပြောင်းအလဲများကိုအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကာလအတွင်းထိုသူငယ်ဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးဖြစ်လာသည်, အလယ်တန်းကျောင်းကတဆင့်နှင့်အထက်တန်းတွင်မူလတန်းကျောင်းကနေ transitions နှင့်အရက်သေစာအသုံးပြုမှုကိုအစပျိုးခဲ့ကြဖို့မထက်ပိုမိုဖွယ်ရှိသည်။ သူတို့အရက်သုံးစွဲခြင်းမှဆက်စပ်အဖြစ်ဤဆောင်းပါးကိုရွယ်တူချင်း, မိသားစုကိုမျှော်လင့်, တိကျတဲ့နှင့် nonspecific အန္တရာယ်နှင့်အကာအကွယ်အချက်များနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်အရက်သေစာသုံးစွဲခြင်း၏ဆိုးကျိုးများအပါအဝင်, ဒီအသက်အရွယ်-အုပ်စုတွင်အဓိကဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ယန္တရားများအချို့ကိုပြန်လည်သုံးသပ်။ ဘရောင်း et al အားဖြင့်အောက်ပါဆောင်းပါးကို။ လာသောအခါအရက်အသုံးပြုမှုထိပ်နှင့်လူကြီးဖို့နီးကပ်လာသည့်ဆယ်ကျော်သက်ရွေ့လျား, အသက် 16 ထံမှ 20 ဖို့ကာလကို examine ။
"လေ့လာရေးအရက်သောက်၏အစောပိုင်းစတင်ကအခြားတ္ထုများ၏မှီခိုနှင့်အလွဲသုံးစားမှုအပါအဝင်အရက်သေစာနှင့်အတူနောက်ပိုင်းတွင်ပြဿနာများ, နှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းညွှန်ပြ။ "
မိုက်ကယ် Windle, အပြုအမူသိပ္ပံနှင့်ကျန်းမာရေးပညာရေးဦးစီးဌာန, Emory တက္ကသိုလ်, အတ္တလန်တာ, ဂျော်ဂျီယာ။
Linda P. လှံ, စိတ်ပညာဌာန, Binghamton တက္ကသိုလ်, နယူးယောက်ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်, Binghamton, New York က။
အင်ဒရူးဂျေ Fuligni, စိတ်ပညာဌာန, ကာလီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်, Los Angeles မြို့, ကယ်လီဖိုးနီးယား။
Adrian Angold, စိတ်ရောဂါကုသမှုနှင့်အပြုအမူသိပ္ပံ, Duke တက္ကသိုလ်, Durham, မြောက်ကာရိုလိုင်းနားဦးစီးဌာန။
ဂျိန်းဃဘရောင်း, သတင်းစာပညာနှင့် Mass Communication, Chapel Hill မှာမြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားတက္ကသိုလ်, Chapel Hill, မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားကျောင်း။
ဒံယလေကထင်းရူး, ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ကလေးစိတ်ရောဂါကုသမှုဌာနခွဲအတွက်အကျိုးသက်ရောက်စေအာရုံကြောသိပ္ပံ, စိတ်ကျန်းမာရေးအမျိုးသားအင်စတီကျု, Bethesda, Maryland က။
Greg တီစမစ်, စိတ်ပညာဌာန, ကီတက္ကသိုလ် Lexington, ကီ။
ဂျေး Giedd, ကလေးစိတ်ရောဂါကုသမှုဘဏ်ခွဲ, စိတ်ကျန်းမာရေးအမျိုးသားအင်စတီကျု, Bethesda, Maryland ကဦးနှောက် Imaging က။
ရော်နယ်အောင်နိုင်အီး Dahl, စိတ်ရောဂါကုသမှုနှင့်ကလေးအထူးကု, ရှိကြောင်း Pittsburgh တက္ကသိုလ်မှရှိကြောင်း Pittsburgh, Pennsylvania ပြည်နယ်၏ဦးစီးဌာနများ။
Acheson SK ကို, Stein RM, Swartzwelder HS ။ စူးရှသောအီသနောတို့က semantic နဲ့ကိန်းဂဏန်းများမှတ်ဉာဏ်၏ချွတ်ယွင်း: ခေတ်-မှီခိုသက်ရောက်မှု။ အရက်: လက်တွေ့နှင့်စမ်းသပ်သုတေသန။ 1998;22(7): 1437-1442 ။ PMID: 9802525 ။
အန်ဒါဆင်ကီလိုဂရမ်, Smith က GT ကို, Fischer SF ။ အမျိုးသမီးများနှင့်ဝယ်ယူကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု: အရက်ကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်သင်ယူမှုဂယက်ရိုက်။ အရက်အပေါ်လေ့လာရေးဂျာနယ်။ 2003;64(3): 384-392 ။ PMID: 12817828 ။ [PubMed]
Angold တစ်ဦးက, Costello EJ, Worthman CM ။ အပျိုဖော်ဝင်ခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါ: အဆိုပါအသက်အခန်းကဏ္ဍ, pubertal အခြေအနေနှင့် pubertal အချိန်ကိုက်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာ။ 1998;28(1): 51-61 ။ PMID: 9483683 ။ [PubMed]
Behar: D, Berg က CJ, Rapoport JL, et al ။ High-အန္တရာယ်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုကလေးငယ်များအတွက်အီသနော၏အမူအကျင့်များနှင့်ဇီဝကမ္မသက်ရောက်မှု: တစ်ဦးကလေယာဉ်မှူးလေ့လာမှု။ အရက်: လက်တွေ့နှင့်စမ်းသပ်သုတေသန။ 1983;7(4): 404-410 ။ PMID: 6318590 ။
Berndt တီ Developmental ရွယ်တူများနှင့်မိဘများအညီပြောင်းလဲစေပါသည်။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစိတ်ပညာ။ 1979;15: 608-616 ။
Bolles RC ။ အားဖြည့်, မျှော်မှန်းနှင့်သင်ယူမှု။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ 1972;79: 394-409 ။
ဘရောင်းကို BB ။ ရွယ်တူချင်းအုပ်စုများ။ Feldman က S, Elliott သည်, G, အယ်ဒီတာများ in: ။ ခုံ၌ဦး: အဆိုပါ Developing ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်။ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; ကင်းဘရစ်, MA: 1990 ။ စစ။ 171-196 ။
ဘရောင်းလုပ် SA, Gleghorn တစ်ဦးက, Schuckit MA, et al ။ ဆယ်ကျော်သက်အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအကြားရောဂါလုပ်ဆောင်ရပါမည်။ အရက်အပေါ်လေ့လာရေးဂျာနယ်။ 1996;57(3): 314-324 ။ PMID: 8709590 ။ [PubMed]
Christiansen BA, Smith က GT ကို, Roehling PV, Goldman က MS ။ တစ်နှစ်အကြာတွင်ဆယ်ကျော်သက်အရက်သောက်အပြုအမူကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့အရက်ကိုမျှော်လင့်အသုံးပြုခြင်း။ အတိုင်ပင်ခံနှင့်လက်တွေ့စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 1989;57(1): 93-99 ။ PMID: 2925979 ။ [PubMed]
cicero တီဂျေဒမ် ML, O'Connor L ကို, et al ။ အပျိုဖော်ဝင်ခြင်းနှင့်အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရငျ့နှင့်သူတို့၏သားမွေး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ကိုယ်စားလှယ်ညွှန်းကိန်းအပေါ်နာတာရှည်အရက်အုပ်ချုပ်ရေးသြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ ဆေးဝါးဗေဒနှင့်စမ်းသပ်ဟော်မုန်း၏ဂျာနယ်။ 1990;255(2): 707-715 ။ PMID: 2243349 ။ [PubMed]
ပုံတူပွားခြင်း CR, Sigvardsson S က, Bohman အမ်ကလေးဘဝကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးငယ်ရွယ်လူကြီးများအတွက်အရက်အလွဲသုံးစားမှုခန့်မှန်းထားပါတယ်။ အရက်: လက်တွေ့နှင့်စမ်းသပ်သုတေသန။ 1988;12(4): 494-505 ။ PMID: 3056070 ။
Collins WA ။ , အပြန်အလှန်မွဲနှင့်ပြောင်းလဲမှုကိုထိခိုက်စေခြင်း, သိမှတ်ခံစားမှု: adolescence ဖို့အကူးအပြောင်းအတွက်မိဘကလေးဆက်ဆံရေး။ ခုနှစ်တွင်: Montemayor R ကို, အဒမ်, G, Gullotta T က, အယ်ဒီတာများ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်တိုးတက်မှုတွေ။ Vol 2: ငယ်ဘဝကနေဆယ်ကျော်သက်ရန်ေူပာင်းလဲရေး။ sage ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း; Beverly Hills မှာ,, CA: 1990 ။ စစ။ 85-106 ။
Collins WA ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေး၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအရေးပါမှု: ဒဏ္ဍာရီထက်ပို။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အပေါ်သုတေသနဂျာနယ်။ 2003;13: 1-24 ။
Costello EJ, ထင်းရူး DS, Hammen ကို C, et al ။ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်စိတ်ဓါတ်များမမှန်များ၏သဘာဝအလျောက်သမိုင်း။ ဟားဗတ်။ 2002;52(6): 529-542 ။ PMID: 12361667 ။ [PubMed]
သင်္ဘောသား et al-FT, Braun CJ, Hoplight B က။ Bing အီသနောစားသုံးမှုအရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ငယ်ရွယ်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်များတွင် differential ကိုဦးနှောက်ပျက်စီးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အရက်: လက်တွေ့နှင့်စမ်းသပ်သုတေသန။ 2000;24(11): 1712-1723 ။ PMID: 11104119 ။
Cruz IY, Dunn ME ။ မူလတန်းကျောင်းကလေးတွေအတွက်အရက်ကိုမျှော်လင့်စိန်ခေါ်နေဖြင့်အစောပိုင်းအရက်သေစာအသုံးပြုမှုအတွက်အန္တရာယ်လျှော့ချ။ အတိုင်ပင်ခံနှင့်လက်တွေ့စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 2003;71(3): 493-503 ။ PMID: 12795573 ။ [PubMed]
de ဝမ်း MD, Clark က DB, ဘီယာ SR, et al ။ ဆယ်ကျော်သက်-စတင်ခြင်းအရက်သေစာအသုံးပြုမှုမမှန်အတွက် Hippocampal အသံအတိုးအကျယ်။ စိတ်ရောဂါကုသမှု၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 2000;157(5): 737-744 ။ PMID: 10784466 ။ [PubMed]
Dees WL, Skelley CW, Hiney JK, Johnston CA. prepubertal အမျိုးသမီးကြွက်များတွင် hypothalamic နှင့် pituitary ဟော်မုန်းအပေါ်အီသနော၏လုပ်ဆောင်ချက်များ။ အရက်။ 1990;7(1): 21-25 ။ PMID: 1968748 ။ [PubMed]
Dobkin PL, Tremblay RE, Mass LC, Vitaro အက်ဖ်တစ်ဦးချင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုယောက်ျားလေးများရဲ့အစောပိုငျးစတင်ခြင်းခန့်မှန်းအတွက်သက်တူရွယ်တူဝိသေသလက္ခဏာများ: တစ်ဦးကခုနစ်နှစ် longitudinal လေ့လာမှု။ ကလေးသူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး။ 1995;66(4): 1198-1214 ။ PMID: 7671656 ။ [PubMed]
ဒိုနိုဗန် je, မွှော့ SL, Zucker RA, et al ။ တကယ်ပဲအသက်မပြည့်သေးသောက်: မူလတန်းကျောင်းသားများအကြားအရက်အသုံးပြုခြင်း။ အရက်: လက်တွေ့နှင့်စမ်းသပ်သုတေသန။ 2004;28(2): 341-349 ။ PMID: 15112942 ။
Doremus TL, Brunell SC, Varlinskaya EI, လှံ LP ။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်စူးရှသောအီသနောထံမှဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း Anxiogenic ဆိုးကျိုးများ။ ဆေးဝါးဗေဒ, ဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 2003;75(2): 411-418 ။ PMID: 12873633 ။
Dunn ME, Goldman က MS ။ တန်းတစ် function ကိုအဖြစ်မူလတန်းကျောင်းကလေးတစ်ဦးအရက်မျှော်မှန်းမှတ်ဉာဏ်ကွန်ယက်၏ပင်ကိုယ်မူလမော်ဒယ်လ်။ စမ်းသပ်နှင့်လက်တွေ့ Psychopharmacology ။ 1996;4: 209-217 ။
Dunn ME, Goldman က MS ။ ခေတ်နှင့်အ 3rd-, 6th- နှင့် 12th-တန်းကလေးများအတွက်အရက်ကိုမျှော်လင့်များ၏မှတ်ဉာဏ်အဖှဲ့အစညျးမှာအရက်သောက်-related ကွဲပြားခြားနားမှု။ အတိုင်ပင်ခံနှင့်လက်တွေ့စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 1998;66(3): 579-585 ။ PMID: 9642899 ။ [PubMed]
Dunn ME, Goldman က MS ။ မှတ်ဉာဏ်အတွက်အရက်ကိုမျှော်လင့်၏ multidimensional လာခြင်း-based မော်ဒယ်၏ validation: ခေတ်နှင့်ပထမဦးဆုံးအပေါငျးအသငျးမြားအဖြစ်အကဲဖြတ်သားသမီးများ၏မျှော်လင့်ချက်များအတွက်သောက်သုံးရေ-related ကွဲပြားခြားနားမှု။ အရက်: လက်တွေ့နှင့်စမ်းသပ်သုတေသန။ 2000;24(11): 1639-1646 ။ PMID: 11104111 ။
Durant RH အရောမ ES, Rich M က, et al ။ ဂီတဗီဒီယိုပုံဖော်ဆေးရွက်ကြီးနှင့်အရက်သုံးစွဲခြင်းအပြုအမူတွေ: တစ်ဦးကအကြောင်းအရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအမေရိကန်ဂျာနယ်။ 1997;87(7): 1131-1135 ။ PMID: 9240102 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Eaton DK, Kann L ကို, Kinchen S က, et al ။ လူငယ်အန္တရာယ်အပြုအမူ Surveillance: အမေရိကန်, 2005 ။ MMWR Surveillance တွေကို Summaries ။ 2006;55(5): 1-108 ။ PMID: 16760893 ။
ဒ J ကို, Midgley ကို C, Wigfield တစ်ဦးက, et al ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဖွံ့ဖြိုးရေး: ကျောင်းများနှင့်မိသားစုများအတွက်နုပျိုမြီးကောင်ပေါက် '' အတွေ့အကြုံများအပေါ်ဇာတ်စင်-ပတ်ဝန်းကျင်မထိုက်မတန်၏သက်ရောက်မှု။ အမေရိကန်စိတ်ပညာရှင်။ 1993;48(2): 90-101 ။ PMID: 8442578 ။ [PubMed]
Eckardt MJ, et al SE, Gessa GL, File ။ ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်အပေါ်အလယ်အလတ်အရက်သောက်၏ဆိုးကျိုးများ။ အရက်: လက်တွေ့နှင့်စမ်းသပ်သုတေသန။ 1998;22(5): 998-1040 ။ PMID: 9726269 ။
Emanuele N ကို, Ren J ကို, Lapaglia N ကို, et al ။ ခေတ်နှင့်အ opiate မှီခို: EtOH အမျိုးသမီးနို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေအပျိုဖော်ဝင် disrupts ။ endocrine ။ 2002;18(3): 247-254 ။ PMID: 12450316 ။ [PubMed]
ကူးတို့ CF, Shtiegman K သည်ဘုရင်ဂျေအေ။ အထီးဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဟမ်းစတားအတွက်မိမိဆန္ဒအလျောက်အီသနောစားသုံးမှု Testosterone နဲ့ကျူးကျော်တိုးပွားစေပါသည်။ ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 1998;63(5): 739-744 ။ PMID: 9617993 ။ [PubMed]
Fuligni AJ ။ မိဘအုပ်ထိန်းသူခွင့်အာဏာ, ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့်မိဘ-ဆယ်ကျော်သက်ဆက်ဆံရေး: မက္ကဆီကန်, တရုတ်, ဖိလစ်ပိုင်, ဥရောပနောက်ခံကနေဆယ်ကျော်သက်များ၏လေ့လာမှုတစ်ခု။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစိတ်ပညာ။ 1998;34: 782-792 ။ [PubMed]
Fuligni AJ, ဒ je ။ ရိပ်မိမိဘကလေးဆက်ဆံရေးနှင့်ရွယ်တူချင်းဆီသို့ဦးတည်အစောပိုင်း-မြီးကောင်ပေါက် '' တိမ်းညွတ်။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစိတ်ပညာ။ 1993;29: 622-632 ။
Fuligni AJ, ဒ JS, ဘာဘာ BL, အထက်တန်းကျောင်းကာလအတွင်းကလီ P. အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်ရွယ်တူတိမ်းညွတ်ခြင်းနှင့်ညှိနှိုင်းမှု။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစိတ်ပညာ။ 2001;37(1): 28-36 ။ PMID: 11206430 ။ [PubMed]
။ Ge X ကို, Conger RD, အသက်ကြီး GH ဂျူနီယာစောလွန်းအသက်လာ: စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲမှမိန်းကလေးငယ်များ '' အားနည်းချက်အပေါ် Pubertal လွှမ်းမိုးမှု။ ကလေးသူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး။ 1996;67(6): 3386-3400 ။ PMID: 9071784 ။ [PubMed]
Giedd ဖြစ်မှု, Blumenthal J ကို, Jefferies NO, et al ။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု: တစ်ဦးက longitudinal MRI လေ့လာမှု။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 1999;2(10): 861-863 ။ PMID: 10491603 ။
Giedd ဖြစ်မှု, Castellanos FX, Rajapakse JC, et al ။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲလူ့ဦးနှောက်၏လိင် dimorphism ။ Neuro-psychopharmacology နှင့်ဟားဗတ်အတွက်တိုးတက်မှုကို။ 1997;21(8): 1185-1201 ။ PMID: 9460086 ။ [PubMed]
Gogtay N ကို, Giedd ဖြစ်မှု, Lusk L ကို, et al ။ အစောပိုင်းလူကြီးတဆင့်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝစဉ်အတွင်းလူ့ cortical ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ dynamic မြေပုံ။ အမေရိက၏အမရေိကနျပွညျထောငျစု၏သိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ၏တရားစွဲဆိုမှု။ 2004;101(21): 8174-8179 ။ PMID: 15148381 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Goldberg JH, Halpern-Felsher BL, Millstein စင်ကာပူဒေါ်လာ။ invulnerability ကျော်လွန်: အရက်မသောက်ရမှဆယ်ကျော်သက် '' ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်အကျိုးခံစားခွင့်၏အရေးပါပုံကို။ ကနျြးမာရေးစိတ်ပညာ။ 2002;21(5): 477-484 ။ PMID: 12211515 ။ [PubMed]
BF, Dawson DA ပေးသနား။ အရက်သုံးစွဲခြင်း၏စတင်ခြင်းနှင့် DSM-IV အရက်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်မှီခိုနှင့်အတူ၎င်း၏အသင်းအဖွဲ့မှာအသက်အရွယ်: အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် longitudinal အရက် epidemiological စစ်တမ်းကနေရလာဒ်။ ပစ္စည်းအလွဲသုံးမှု၏ဂျာနယ်။ 1997;9: 103-110 ။ PMID: 9494942 ။ [PubMed]
ဂရင်း ML, Way ကို N ကို, Black ကလက်တင်နှင့်အာရှအမေရိကန်ဆယ်ကျော်သက်ကြားတွင်ရိပ်မိအရွယ်ရောက်ပြီးသူနဲ့သက်တူရွယ်တူခွဲခြားဆက်ဆံမှု Pahl K. လမ်းကြောင်း: ပုံစံများနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Correlate ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစိတ်ပညာ။ 2006;42(2): 218-236 ။ PMID: 16569162 ။ [PubMed]
Hawkins က JD, Catalano RF, Miller က JY ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်အစောပိုင်းလူကြီးအတွက်အရက်နှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးပြဿနာများအတွက်အန္တရာယ်များနှင့်အကာအကွယ်အချက်များ: ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့အအကျိုးသက်ရောက်မှု။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းလွှာ။ 1992;112(1): 64-105 ။ PMID: 1529040 ။ [PubMed]
ဟာနန်ဒက်ဇ်-Gonzalez M က, ရေ့စ်ဂျေအရက်အပျိုဖော်ဝင်အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစတင်ခြင်းအတွက်ကြိုတင်ထုတ်လုပ်မီ။ အရက်။ 2000;21(2): 133-140 ။ PMID: 10963936 ။ [PubMed]
ဟေးလ် SY ။ အကျိုးဆက်များအနေဖြင့်ခွဲခြားအကြောင်းတရားများ: အရက်သုံးစွဲခြင်းနှင့်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ Electro-ဇီဝကမ္မနှင့် morphological ညွှန်းကိန်း၏လမ်းကြောင်း။ သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်။ 2004;1021: 245-259 ။ PMID: 15251894 ။ [PubMed]
Hiney JL, ရှားပါးမှုအခက်အခဲ RK, Lara က F, 3RD, et al ။ leptin လျှို့ဝှက်ချက်များနှင့် leptin-သွေးဆောင် luteinizing ဟော်မုန်း (LH) နှောင်းပိုင်းတွင်လူငယ်အမျိုးသမီးကြွက်များကနေဖြန့်ချိအပေါ်အီသနော၏ဆိုးကျိုးများ။ အရက်: လက်တွေ့နှင့်စမ်းသပ်သုတေသန။ 1999;23(11): 1785-1792 ။ PMID: 10591595 ။
Johnson က EO, Arria လေး, Borg, G, et al ။ အကငျြ့ပြဿနာကြီးထွားအစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှအလယ်တန်းကလေးဘဝထဲကနေ behaviors: လိင်ကွဲပြားမှုနှင့်အစောပိုင်းအရက်သေစာသုံးစွဲခြင်း၏သံသယသြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ အရက်အပေါ်လေ့လာရေးဂျာနယ်။ 1995;56(6): 661-671 ။ PMID: 8558898 ။ [PubMed]
Johnston ld, O'Malley pm တွင်, Bachman JG, Schulenberg je ။ 1975-2005: ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မူးယစ်ဆေးအသုံးပြုမှုအပေါ်အနာဂတ်အမျိုးသားစစ်တမ်းရလဒ်များစောင့်ကြည့်။ Volume ကိုငါ: က Secondary School တွင်ကျောင်းသားများ။ ကနျြးမာရေးအမျိုးသား Institutes; Bethesda, MD: 2006 ။ NIH ထုတ်ဝေမှုမပါ။ 06-5883 ။
Kraus: D, Smith က GT ကို, Ratner နာရီ။ တန်းကျောင်းကလေးတွေအတွက်အရက်-related မျှော်လင့်ထားမွမ်းမံ။ အရက်အပေါ်လေ့လာရေးဂျာနယ်။ 1994;55(5): 535-542 ။ PMID: 7990463 ။ [PubMed]
Labouvie အီး, ဘိတ် ME, Pandina RJ ။ ပထမဦးဆုံးအသုံးပြုအသက်အရွယ်: ၎င်း၏ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် utility ကို။ အရက်အပေါ်လေ့လာရေးဂျာနယ်။ 1997;58(6): 638-643 ။ PMID: 9391924 ။ [PubMed]
Larson R ကို, Richards MH ။ နှောင်းပိုင်းတွင်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်နေ့စဉ်ပေါင်းသင်း: ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအခင်းအကျင်းပြောင်းခြင်း။ ကလေးသူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး။ 1991;62(2): 284-300 ။ PMID: 2055123 ။ [PubMed]
Larson RW, Moneta, G, Richards MH, Wilson ကအက်စ်စဉ်ဆက်မပြတ်တည်ငြိမ်ရေးနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုဖြတ်ပြီးနေ့စဉ်စိတ်ခံစားမှုအတွေ့အကြုံကိုအတွက်ပြောင်းလဲမှု။ ကလေးသူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး။ 2002;73(4): 1151-1165 ။ PMID: 12146740 ။ [PubMed]
Laursen B, Coy KC, Collins WA ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုဖြတ်ပြီးမိဘကလေးပဋိပက္ခအတွင်းပြန်လည်အပြောင်းအလဲများကို: Meta-analysis သည်။ ကလေးသူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး။ 1998;69(3): 817-832 ။ PMID: 9680687 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Leventhal T က, Brooks-ဂွန်ဂျေသူတို့တှငျနထေိုငျအဆိုပါရပ်ကွက်: ကလေးနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ရလဒ်များအပေါ်ရပ်ကွက်အတွင်းနေထိုင်များ၏သက်ရောက်မှုများ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းလွှာ။ 2000;126(2): 309-337 ။ PMID: 10748645 ။ [PubMed]
Little က PJ, အဒမ် ML, cicero တီဂျေ။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲအထီးကြွက်များတွင် hypothalamic-pituitary-gonadal ဝင်ရိုးပေါ်အရက်၏ဆိုးကျိုးများ။ ဆေးဝါးဗေဒနှင့်စမ်းသပ်ဟော်မုန်း၏ဂျာနယ်။ 1992;263(3): 1056-1061 ။ PMID: 1469619 ။ [PubMed]
Luna B, Sweeney ဂျေအေ။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဦးနှောက် function ကိုပေါ်ပေါက်ရေး: တုံ့ပြန်မှုတားစီး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ FMRI လေ့လာမှုများ။ သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်။ 2004;1021: 296-309 ။ PMID: 15251900 ။ [PubMed]
MacCorquodale K ကို Meehl PE ။ မျှော်မှန်းသီအိုရီ၏တရားဝင်အဖြစ်ပဏာမအကြံပြုချက်များ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ 1953;60(1): 55-63 ။ PMID: 13037938 ။ [PubMed]
Magnusson: D, Stattin H ကို, Allen က VL ။ ဇီဝဗေဒရငျ့နှင့်လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ: လူကြီးမှနှစ်လယ်ပိုင်းတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကနေတချို့ညှိနှိုင်းမှုဖြစ်စဉ်များတစ် longitudinal လေ့လာမှု။ လူငယ်နှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ဂျာနယ်။ 1985;14: 267-283 ။
Mathios တစ်ဦးက, Avery R ကို, Bisogni ကို C, ချုပ်အချိန်ရုပ်မြင်သံကြားပေါ် Shanahan ဂျေအရက်ပုံဖော်ခြင်း: Manifest နှင့်ငုပ်လျှိုးနေမက်ဆေ့ခ်ျ။ အရက်အပေါ်လေ့လာရေးဂျာနယ်။ 1998;59(3): 305-310 ။ PMID: 9598711 ။ [PubMed]
McBride WJ, ဘဲလ် RL, Rodd ZA, et al ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အရက်သောက်ခြင်းနှင့်၎င်း၏တာဝေးပစ်အကျိုးဆက်များ: တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များနှင့်အတူလေ့လာရေး။ အရက်ထဲမှာမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းတိုးတက်မှု။ 2005;17: 123-142 ။ PMID: 15789863 ။ [PubMed]
ဆက်မက်ကာသီ DM, Kroll LS, Smith က GT ကို။ disinhibition ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်အရက်သေစာအသုံးပြုမှုအတွက်အန္တရာယ်သင်ယူခြင်း။ စမ်းသပ်နှင့်လက်တွေ့ Psychopharmacology ။ 2001a;9(4): 389-398 ။ PMID: 11764015 ။ [PubMed]
ဆက်မက်ကာသီ DM, Miller က TL, Smith က GT ကို, စမစ်ဂျေအေ။ အရက်ကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်အန္တရာယ်အတွက် Disinhibition နှင့်မျှော်မှန်း: အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ကောလိပ်နမူနာနှိုငျးယှဉျ။ အရက်အပေါ်လေ့လာရေးဂျာနယ်။ 2001b;62(3): 313-321 ။ PMID: 11414341 ။ [PubMed]
Miller ကလေး, စမစ် GT ကို, Goldman က MS ။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအတွက်အရက်ကိုမျှော်လင့်၏ပေါ်ပေါက်ရေး: တစ်ဦးကဖြစ်နိုင်သမျှအရေးပါကာလ။ အရက်အပေါ်လေ့လာရေးဂျာနယ်။ 1990;51(4): 343-349 ။ PMID: 2359308 ။ [PubMed]
Moffitt TE, Caspi အေကလေးဘဝခန့်မှန်းယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းအကြားတွင်ဘဝ-သင်တန်း persistent နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်-ကန့်သတ်ထား antisocial လမ်းကြောင်းခွဲခြား။ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် Psychopathology ။ 2001;13(2): 355-375 ။ PMID: 11393651 ။ [PubMed]
ဆေးထိုးအပ် R ကို, McCubbin H ကို, Reineck R ကို, et al ။ ဆယ်ကျော်သက်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအတွက် Interpersonal လွှမ်းမိုးမှု: အဟောင်းတွေမောင်နှမ, မိဘ, ရွယ်တူများ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ အဆိုပါစွဲအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်။ 1986;21(7): 739-766 ။ PMID: 3781689 ။ [PubMed]
နယ်လ်ဆင်, CA, Bloom FE, ကင်မရွန် JL, et al ။ သမာဓိ, ပုံမှန်နှင့် atypical ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အခြေအနေတွင်ဦးနှောက်ကို-အပြုအမူဆက်ဆံရေး၏လေ့လာမှု multidisciplinary ချဉ်းကပ်။ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် Psychopathology ။ 2002;14(3): 499-520 ။ PMID: 12349871 ။ [PubMed]
Oullette ဂျာဂျရတ်က M, မျောက်လွှဲကျော် FX, Reis-Bergan အမ်မိဘတို့, ရွယ်တူများနှင့် proto-အမျိုးအစားများ: ကျေးလက်လူငယ်အတွက်ဆယ်ကျော်သက်အရက်ကိုမျှော်လင့်၏ Antecedents, အရက်သောက်ခြင်း, အရက်-related ဘဝပြဿနာများကို။ ကိုစှဲအပြုအမူ၏စိတ်ပညာ။ 1999;13: 183-197 ။
Pedersen က S, Seidman အီး context နှင့်ဝင်ငွေနည်းမြို့ပြမြီးကောင်ပေါက်အကြား Out-of-ကျောင်းကလှုပ်ရှားမှုပါဝင်မှုများ၏ဆက်စပ်မှု။ ခုနှစ်တွင်: Mahoney JL, Larson RW, ဒ JS, အယ်ဒီတာများ။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု context အဖြစ်ဖှဲ့စညျးလှုပ်ရှားမှုများ: သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများလှုပ်ရှားမှုများ, ပြီးနောက်-ကျောင်းနှင့်ရပ်ရွာ Programs ကို။ လောရင့် Erlbaum Associates မှထုတ်ဝေ; Mahwah, NJ: 2005 ။ စစ။ 85-109 ။
Peterson AC အ။ ဆယ်ကျော်သက်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ စိတ်ပညာ၏နှစ်ပတ်လည်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ 1988;39: 583-607 ။ PMID: 3278681 ။
Phinney JS ။ မြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူကြီးများအတွက်တိုင်းရင်းသားရေးရာဝိသေသလက္ခဏာ: သုတေသနကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းလွှာ။ 1990;108(3): 499-514 ။ PMID: 2270238 ။ [PubMed]
ရောဘတ် DF, Foehr ဦး, Rideout V. အမေရိကရှိကလေးများနှင့်မီဒီယာ။ ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; နယူးယောက်: 2004a ။
ရောဘတ် DF, Henriksen L ကို, Foehr UG ။ မြီးကောင်ပေါက်နှင့်မီဒီယာ။ ခုနှစ်တွင်: Lerner R ကို, Steinberg L ကို, အယ်ဒီတာများ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်စိတ်ပညာ၏လက်စွဲစာအုပ်။ ဂျွန် Wiley & ၏သား 2nd ed; Hoboken, NJ: 2004b ။ စစ။ 487-522 ။
Rosenthal DA, Smith ကလေး, De Visser R. ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်ပထမဦးဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှာအသက်အရွယ်လွှမ်းမိုးလူမှုရေးအချက်များ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း။ 1999;28(4): 319-333 ။ PMID: 10553493 ။ [PubMed]
အရက်သမားသားတို့တွင်အရက်၏စယ်အမ်ပျံ့နှံ့နေတဲ့။ ခုနှစ်တွင်: Windle M က, Searles JS, အယ်ဒီတာများ။ အရက်၏ကလေးများ: ဝေဖန်ပတ်သ က်. ။ Guilford စာနယ်ဇင်း; နယူးယောက်: 1990 ။ စစ။ 9-38 ။
Schuckit MA, Smith TL, Anderson KG, Brown SA ။ အရက်အပေါ်တုန့်ပြန်မှုအဆင့်ကိုစစ်ဆေးခြင်း - လူမှုရေးသတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့အရက်သောက်ခြင်းအန္တရာယ် - နှစ် ၂၀ အလားအလာရှိတဲ့လေ့လာမှု။ အရက်: လက်တွေ့နှင့်စမ်းသပ်သုတေသန။ 2004;28(12): 1881-1889 ။ PMID: 15608605 ။
Siegmund S က, Vengeliene V ကို, အဆိုတော်သင်္ဘော MV, ဆင်းရဲချို့တဲ့ခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုအဆင့်တွေနဲ့ရေရှည်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်အရက်သောက်စတင်ခြင်းမှာအသက် Spanagel R. သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ အရက်: လက်တွေ့နှင့်စမ်းသပ်သုတေသန။ 2005;29(7): 1139-1145 ။ PMID: 16046868 ။
Simmons R ကို, Blyth ဃ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ထဲသို့ Moving ။ Aldine က de Gruyter; နယူးယောက်: 1987 ။
Slawecki CJ ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအီသနောနှင့်ထိတွေ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်အီသနောမှပြောင်းလဲ EEG တုံ့ပြန်မှု။ အရက်: လက်တွေ့နှင့်စမ်းသပ်သုတေသန။ 2002;26(2): 246-254 ။ PMID: 11964565 ။
Smetana JG ။ မြီးကောင်ပေါက် 'နှင့်မိဘများ' 'မိဘအခွင့်အာဏာဆိုတဲ့သဘောတရား။ ကလေးသူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး။ 1988;59(2): 321-335 ။ PMID: 3359858 ။ [PubMed]
Smith က GT ကို။ အရက်မှအားနည်းချက်များ၏အာမခံအဖြစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမျှော်မှန်း။ သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်။ 1994;708: 165-171 ။ PMID: 8154677 ။ [PubMed]
Smith က GT ကို, အန်ဒါဆင်ကီလိုဂရမ်။ ဝယ်ယူကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအဖြစ်အရက်ပြဿနာများအတွက်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအန္တရာယ်: ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများအတွက်မော်ဒယ်နှင့်အကြံပြုချက်များ။ ခုနှစ်တွင်: Monti pm တွင်, Colby သည် SM, O'Leary က TA, အယ်ဒီတာများ။ မြီးကောင်ပေါက်, အရက်နှင့်ပစ္စည်းအလွဲသုံးမှု: အကျဉ်းချုပ်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမှတဆင့်ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေရောက်ရှိသွားသည်။ Guilford စာနယ်ဇင်း; နယူးယောက်: 2001 ။ စစ။ 109-141 ။
Smith က GT ကို, Goldman က MS, Greenbaum PE, Christiansen BA ဘွဲ့။ အရက်သောက်ခြင်းမှလူမှုရေးပံ့ပိုးကူညီဘို့မျှော်မှန်း: အဆိုပါမတူကွဲပြား High-မျှော်မှန်း၏လမ်းကြောင်းနှင့်အနိမ့်မျှော်မှန်းမြီးကောင်ပေါက်။ ပုံမှန်မဟုတ်သောစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 1995;104(1): 32-40 ။ PMID: 7897051 ။ [PubMed]
Smith က GT ကို, ဝီလျံ SF, Cyders MA, ကယ်လီအက်စ်ရှိသူများအတွက်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး-ပတ်ဝန်းကျင်အရောင်းအများနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာလဲ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစိတ်ပညာ။ 2006;42(5): 877-887 ။ PMID: 16953693 ။ [PubMed]
Sowell ER, Thompson ကလေး, Leonard CM, et al ။ သာမန်ကလေးတွေအတွက် cortical အထူနှင့်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏ longitudinal မြေပုံ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2004;24(38): 8223-8231 ။ PMID: 15385605 ။ [PubMed]
လှံကို LP ။ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်နှင့်ကောလိပ်ကျောင်းသောက်: သုံးစွဲဖို့ propensity နှင့်အလွဲသုံးစားမှုအရက်၏ဇီဝအခြေခံ။ အရက်အပေါ်လေ့လာရေးဂျာနယ်။ 2002;14: 71-81 ။ PMID: 12022731 ။
လှံကို LP သို့ Varlinskaya EI ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်။ အရက် sensitivity ကို, သည်းခံစိတ်နှင့်စားသုံးမှု။ အရက်ထဲမှာမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းတိုးတက်မှု။ 2005;17: 143-159 ။ PMID: 15789864 ။ [PubMed]
Stacey AW, Zogg JB, Unger JB, ချို CW ။ ရုပ်မြင်သံကြားအရက်ကြော်ငြာတွေနှင့်နောက်ဆက်တွဲဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအရက်သေစာသုံးစွဲခြင်းမှထိတွေ့မှု။ ကနျြးမာရေးအပြုအမူ၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 2004;28(6): 498-509 ။ PMID: 15569584 ။ [PubMed]
မိဘကလေးအကွာအဝေးနှင့် pubertal ရငျ့အကြား Steinberg အယ်လ်အပြန်အလှန်စပ်လျဉ်း။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစိတ်ပညာ။ 1988;24: 122-128 ။
Steinberg အယ်လ် Pubertal ရငျ့နှင့်မိဘ-ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအကွာအဝေး: တစ်ဦးဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရှုထောင့်။ ခုနှစ်တွင်: အဒမ်, G, Montemayor R ကို, Gullota T က, အယ်ဒီတာများ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်တိုးတက်မှုတွေ။ Volume ကို 1 ။ sage ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း; Beverly Hills မှာ,, CA: 1989 ။ စစ။ 71-79 ။
Steinberg အယ်လ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်, ပဋိပက္ခနှင့်မိသားစုဆက်ဆံရေးအတွက်သဟဇာတ။ Feldman က S, Elliott သည်, G, အယ်ဒီတာများ in: ။ ခုံ၌ဦး: အဆိုပါ Developing ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်။ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; ကင်းဘရစ်, MA: 1990 ။ စစ။ 255-276 ။
Steinberg L ကို, Silverberg SB ။ အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်၏ vicissitudes ။ ကလေးသူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး။ 1986;57(4): 841-851 ။ PMID: 3757604 ။ [PubMed]
Stern ပာ SR ။ မြင်ကွင်းကြီးမှာဆယ်ကျော်သက်ကနေမက်ဆေ့ခ်ျများ: ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း, အရက်သောက်ခြင်း, ဆယ်ကျော်သက်ဗဟိုပြုရုပ်ရှင်ကားထဲမှာမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု။ ကနျြးမာရေးဆက်သွယ်ရေးဂျာနယ်။ 2005;10(4): 331-346 ။ PMID: 16036740 ။ [PubMed]
ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲမှု မူးယစ်ဆေးဝါးအသုံးပြုမှုနှင့်ကျန်းမာရေးအပေါ် 2002 အမျိုးသားစစ်တမ်း မှစ. ရလဒ်များ: အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တွေ့ရှိချက်။ အသုံးချလေ့လာရေးရုံးမှ; Rockville, MD: 2003 ။ (NHSDA စီးရီးကို H-22) ။ DHHS ထုတ်ဝေမှုမပါ။ SMA 03-3836 ။
Sun ကအက်စ်အက်စ်, Schubert CM, Chumlea WC, et al ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရငျ့နှင့်အမေရိကန်ကလေးငယ်များအကြားလူမျိုးရေးကွဲပြားမှု၏အချိန်ကိုက်အမျိုးသားခန့်မှန်းချက်။ ကလေးအထူးကု။ 2002;110(5): 911-919 ။ PMID: 12415029 ။ [PubMed]
Tapert SF, Schweinsburg အေဒီ။ လူ့ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်နှင့်အရက်သုံးစွဲခြင်းမမှန်။ အရက်ထဲမှာမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းတိုးတက်မှု။ 2005;17: 177-197 ။ PMID: 15789866 ။ [PubMed]
Tentler JJ, Lapaglia N ကို, Steiner J ကို, et al ။ peripubertal ကြွက်များတွင်အီသနော, ကြီးထွားဟော်မုန်းတွေနဲ့ testosterone ဟော်မုန်း။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်၏ဂျာနယ်။ 1997;152(3): 477-487 ။ PMID: 9061969 ။ [PubMed]
Toga AW, Thompson ကဝန်ကြီးချုပ်။ ဦးနှောက်ခန္ဓာဗေဒ၏ယာယီဒိုင်းနမစ်။ ဇီဝဆေးပညာအင်ဂျင်နီယာနှစ်ပတ်လည်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ 2003;5: 119-145 ။ PMID: 14527311 ။
Tolman EC ။ တိရစ္ဆာန်များနှင့်အမျိုးသားများအတွက်ရည်ရွယ်ချက်အပြုအမူ။ ရာစုကုမ္ပဏီ; နယူးယောက်: 1932 ။
Tubman JG, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်အခက်အခဲစိတ်ထား၏ Windle အမ်မြဲနေတဲ့တစျနှစျတာကာလတစ်လျှောက်စိတ်ကျရောဂါ, ဘဝဖြစ်ရပ်များ, မိသားစုပံ့ပိုးကူညီမှုနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုနှင့်အတူဆက်ဆံရေး။ လူငယ်နှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ဂျာနယ်။ 1995;24: 133-153 ။
Varlinskaya EI, လှံ LP ။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များ၏လူမှုရေးအပြုအမူအပေါ်အီသနော၏ acute သက်ရောက်မှု: စမ်းသပ်မှုအခြေအနေကိုကျွမ်း၏အခန်းက္ပ။ အရက်: လက်တွေ့နှင့်စမ်းသပ်သုတေသန။ 2002;26(10): 1502-1511 ။ PMID: 12394283 ။
Varlinskaya EI, လှံ LP ။ အစောပိုင်းကနေနှောင်းပိုင်းကမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှအီသနော-သွေးဆောင်လူမှုရေးပံ့ပိုးနှင့်လူမှုရေးတားစီးဖို့ sensitivity ကိုအတွက်အပြောင်းအလဲများ။ သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်။ 2004;1021: 459-461 ။ PMID: 15251929 ။ [PubMed]
Werner EE, စမစ်သည် RS ။ လူကြီးမှမွေးဖွားခြင်းကနေအမြင့်အန္တရာယ်ကလေးများ: အ & Odds ကျော်လွှားခြင်း။ ကော်နဲလ်တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; Ithaca, နယူးယော့: 1992 ။
White ကလေး, Swartzwelder HS ။ မြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူကြီးများအတွက်မှတ်ဉာဏ်နှင့်မှတ်ဉာဏ်-related ဦးနှောက် function ကိုအပေါ်အရက်၏အသက်အရွယ်-related ဆိုးကျိုးများ။ အရက်ထဲမှာမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းတိုးတက်မှု။ 2005;17: 161-176 ။ PMID: 15789865 ။ [PubMed]
White ကလေး, Ghia AJ, Levin ED, Swartzwelder HS ။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင် Bing ပုံစံအီသနောထိတွေ့: အီသနောမှနောက်ဆက်တွဲတုန့်ပြန်ပေါ် Differential သက်ရောက်မှု။ အရက်: လက်တွေ့နှင့်စမ်းသပ်သုတေသန။ 2000;24(8): 1251-1256 ။ PMID: 10968665 ။
Windle အမ် ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအကြားအရက်သေစာအသုံးပြုမှု။ sage; တထောင်သပိတ်, CA: 1999 ။
Windle M က, Windle RC ။ အရက်သောက်ခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူငယ်လူကြီးများအကြားယင်း၏အကျိုးဆက်များ။ အရက်ထဲမှာမကြာမီကတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ။ 2005;17: 67-83 ။ PMID: 15789860 ။
Windle M က, Miller က-Tutzauer ကို C, မြီးကောင်ပေါက်အကြား Domenico ဃအရက်သောက်သုံးသတ်သေအပြုအမူများနှင့်အန္တရာယ်များလှုပ်ရှားမှုများ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အပေါ်သုတေသနဂျာနယ်။ 1992;2: 317-330 ။
Windle M က, လှံ LP သို့ Fuligni AJ, et al ။ အသက် 10 နှင့် 15 နှစ်အကြား Developmental လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ယန္တရားများ: အသက်မပြည့်သေးခြင်းနှင့်ပြဿနာအရက်သောက်သို့အသွင်ကူးပြောင်းမှု။ ကလေးအထူးကု။ 2008;121(ပျော့ပျောင်း4။ ): S273-S289 ။ PMID: 18381494 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Zucker RA ။ အရက်သုံးစွဲခြင်းနှင့်အရက်သေစာအသုံးပြုမှုမမှန်: ဘဝသင်တန်းဖုံးအုပ်တစ်ဦးကဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ-biopsychosocial စနစ်များရေးဆွဲရေး။ ခုနှစ်တွင်: Cicchetti: D, Cohen ကို DJ သမား, အယ်ဒီတာများ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ Psychopathology ။ 2nd Edition ကို Wiley; နယူးယောက်: 2006 ။